Sei uye Sei Kuvaka Bhizimisi muDhailand 🥇 【# No.1 kuMiddle East】
Sei uchivaka bhizimusi rako mu Dubai?
Nzira Yokuwana Sei Basa muDhailand mu 2020?
Yakabudiswa na Dubai City Company at April 19, 2019
Nzira Yokugadzira Sei Upenyu seMutengi Wekutengesa?
Sei uye Nei Kuvaka Business in Dubai 👳Murume Aine Turban
Kubira Kana Kukura Ekushambadzira meneja? Mhoroi, zita rangu ndiJohn West. Ini ndagadzirira kukudziridza kambani yako. Ini ndichakubatsira iwe kuwana vatengi kubva kuInternet uye Linkedin !.
Ndiye muvambi we Dubai City Kambani. Makambani akakosha epasi rese anoidana iyo inotungamira Ekukura Hacker ye Kushambadzira kweInternet muDubai. Nzvimbo dzinozivikanwa zvikuru dzekushamwaridzana pamasangano dzinoti ndeimwe yepamusoro yevatengesi ve10 mumagariro enhau.
Vanopfuura mamirioni vanhu vari kutarisa nzvimbo dzekudyidzana dzaJohn West dzinozivikanwa nekutungamira Facebook uye Linkedin mapeji. Iyi ndiyo kambani yangu uye Chinangwa chedu ndechekusimudzira Dubai!
Mabhizinesi mazhinji kubva kuDubai neLondon anoti vakagadzira imwe yepamusoro yemakambani ekushambadzira e100 munhau dzemagariro muDubai.
John ndiye munyori wevanotengesa mumunda wekushambadzira midhiya uye akazivikanwa semumwe wemabhizimusi akanaka kwazvo pasi pezera re30.
Fadza vatengi, kukubatsira iwe kuwana mabasa ekurota muDubai.
Ari kumira SEO, Kushambadzira mukati Google uye Bing uye kazhinji kutaura, kushambadzira kwakachipa?
Hongu, ndinogona kuzviita nokuda kwe50% yemutengo.
Chii chauri kuripa nokuda kwekukura kweHatter Hacker?
SEO uye Nguva?
Kumisikidza ndeykuenderera mberi uye nguva inotora nguva, ndosaka zvichida mari zhinji. Nokusarudza basa mune yangu agency iwe uchagamuchira, pakati pevamwe:
Analysis uye yakazara optimization yehutano,
Kugadziriswa kwezvinyorwa, meta tags title uye tsanangudzo,
Kugadzirisa kwehutano hwehutano hwehutano uye huwandu hwekodhesi,
Zviito pamusoro pekuwana kwakakwana kwekushandisa injini dzemabhoti kuwebsite.
Google Tool Configurations (Google Analytics, etc.),
Zvekuita zvakabatana nehutano hwehutano hwehutano (chivakwa chekubatana)
Internet Kushambadzira ndeye inokurumidza uye inodhura-inoshanda maitiro. Isu tinosima mukushambadzira uye pane ichi chikonzero tinowana vatengi vatsva. Ivo vanowana kushambadza, isu tinochengeta data ravo, tinodzokera kwavari, ivo vanotenga chigadzirwa chedu.
Kufambisa zviziviso zvekutsvaga paInternet muSocial Media.
ROI (kudzoka pakudyara, kudzoka pane Investment).
Kushambadzira pane iyo Runhare (Zviziviso).
Kuwedzera kukurumidza - Kubudirira Kubudirira Nzira dzeBhizinesi Rako
Iwe une bhizinesi diki here? -Ndidane ndinogona kukubatsira! (Inofunga diki)
Ini ndichaongorora bhizinesi renyu + Farai nevatengi vatsva
Iwe une bhizinesi riri mukati here? - Tichazvikurira pamwe chete! (Tichaisa pfungwa pakukunda kukwikwidzana + Email Marketing +)
Iwe une bhizimusi guru here? - Iwe uri kunze kwemahombekombe, iwe uchabvisa zvakawanda!
(Tichazvikurira munyika yose - pakati pevamwe ndakarwisana muA Dubai, London.India, Indonesia - Tinoshanda zvakaoma 24h - 7 mazuva muSvondo rose.
Nditeerere, Pinda paGoogle: Dubai City Company
Uye ipapo iwe uchaona maitiro uye zvandakavaka pane Linkedin, Facebook, Twitter uye Google.
Zvizivikanise nekutengesa shandisi yekutsvaga paInternet & data inobatsira mukuongorora kwangu uye kubudirira kwebasa rangu rebhizimisi.
Zvakanaka, Svika kune chinhu chakadzika. Wakauya kune wangu saiti nekuti iwe ungada kudzidza zvishoma zvishoma sei kutanga kugara muThe Gulf Region, kunyanya muUnited Arab Emirates.
Kambani yangu inonzi Dubai City Company uye ndanga ndichiita mari yakanaka kwemakore mazhinji uye mari yakanaka kwazvo muEmirates, Saudhi Arabhiya uye Qatar.
Muchokwadi, isu tinowana mari yekubatsira vamwe vanhu. Zvinogona kuita kunge zvisiri kuwe, asi kana uchikwanisa kubatsira vamwe. uchanyatso kubudirira muhupenyu.
Kutanga kambani yako yekutengesa unofanira kuyeuka zvinhu zvishomanana. Chinhu chokutanga chinokosha chaunoda kuisa pfungwa pazviri nguva yako yega, pane kushaiwa kwayo.
Nehurombo, kushambadzira kune iwe pachako kuti haisi shamwari yako. Isu vatengesi dzimwe nguva tinoshanda makwai kweanopfuura maawa e18. Ini ndashanda nguva zhinji kana Ini ndairwara kana ndisisina simba. Uye chokwadi iwe semutungamiri wenyika inotevera yekambani yekushambadzira, zvinosiririsa, uchafanirwa kuita mummy zvandave kuita Parizvino paunenge uchivaka Dubai City Company.
Ehe, iyo kambani yekushambadzira ine kumusoro kwayo uye pasi. Usatarisira chero makokonati egore rekutanga rekambani yako. Mushure megore chete iwe uchaona mari iyi yakawanikwa muhomwe yako.
Uchaona kuti kambani yako ichava yakakurumbira pane Google. Vanhu vakawanda vachatsvaga zita renyu uye vachitsvaga mabasa enyu mumagancial network uye pamagariro evanhu.
Mugore rechitatu renyika yako yakajeka, iwe unogona kutarisira purofiti, iti, USD 10,000 pamwedzi. Kuti inoita kunge iri mari yakanaka chaizvo, asi basa raunoisa mukambani ino kana ukaikamuranisa kweawa rinenge rinenge 2 USD neawa. Ndiro rinowedzera kana kuderera mutengo wepakati unoshanda supermarket muRomania.
Nehurombo, iwe haungambove nekufungira kushanda kwakanaka mari kweawa imwe kukambani yako yekushambadzira. Asi, iwe unofanirwa kutarisira kushanda nesimba kune mubhadharo chaiwo wakadzika. Kutanga bhizinesi, iwe unongoda chete dheti yekubata uye zvishoma mafuta mumusoro wako.
Iva weBh boss Izvo zvakaoma Kuda kugadzirisa!
Kumisikidza bhizinesi rako uye kuvaka mhando yako chiitiko chakaoma. Iyo huru yekuwedzera ye online bhizinesi ndeyekuti iwe unogona kuita izvo zvaunonyatsoda chero nguva. Haufanire kushanda mukati mezuva raunogona kushanda husiku. Kana iwe ukakwanisa kumisa bhizinesi rako neGoogle, hongu, iwe uchagona kubhururuka kushanya kwemhiri.
Kushanyira nyika uye kutamba-svetuka kunobatsira uye kunya. Kuti uvake kambani paIndaneti zvakanaka kwazvo, unoda pakati pe5 nemakore 10.
Chokwadi chaicho chakadai kuti haushande gore pakombuta uye ipapo uzvizvitengere wega maWindows uye makanaka eminda"
Saka nokutendeseka ibasa rakaoma kwazvo kuita uye izvo hazvina kumbobvira zvakwana uye kambani yako ichave isingatombo kukwana mari kuti iite. Uri kutsvaga kuwana. Imwe pfungwa ichave nguva uye mukana wekuvandudzwa. Iwe unofanirwa kushanda nesimba uye iwe unofanirwa kuzvibata pachako uye zvechokwadi, zvinokurudzira iwe munzira yakaoma kwazvo.
Semuyenzaniso, iri kuve Dubai kambani yeguta. Ndakavaka iri sangano kwenguva yakareba. Ndakanga ndatanga bhizinesi iri zita rakasiyana raive cV kuendesa mberi mabasa kune dzimwe nyika. Ipapo iyo kambani inochinja zita uye nzira seyambiro yebhizinesi. Iri bhizinesi rakabhadharwa kwemakore ekupedzisira 10.
Saka iwe unogona kungofungidzira kuti zvakaoma sei kuti usimuke uye uchimhanya wakazvipira pachako zuva nezuva. Pane yakakura mibairo ine nguva nemhuri yako uye zvirokwazvo dzimba dzemabasa dzaunofanirwa kutevera uye unofanirwa kuzviita pachako pakutanga.
Ndinozvirangarira makore apfuura ndakazadza iri bhizimusi laptop uye kubvira ipapo ndiri kufambira mberi mune yakanaka nzira. Ndiri kutsvaga kuita mari yakawanda kupfuura yandisingakwanisi kufungidzira. Ehe, ini ndakaisa zviuru zvevikuru zvepakati facebook uye Linkedin adverts. Izvo, zvechokwadi, zvinoita kuti ndiite iwe iwe uine kambani iyo yakagadzikana paMusika weDubai.
Kune rumwe rutivi uye iro bhizinesi rakadai sekutora bhizinesi uye bhizinesi rekushambadzira, richabatsira iwe unovaka yako yako nguva uye yako yemberi. Iwe unoda kuve unokwanisa kuwana zvinhu, Wakaita, iyo nguva yaunoda kuita rudo nenguva. Mumwe munhu achakurongera iwe.
Saka izvozvo zvakanaka uye zvakaipa mukuvaka bhizinesi Online. Iwe unofanirwa here kuyeuka iwo maArab Emirates hazvisi nyore Musika kuita bhizinesi ?. Saka usati watombotanga rako bhizinesi unogona nguva dzose doobie zana muzana chokwadi baba iwe unoziva yako niche uye iwe uine ruzivo rwakakwana kuti simuka umhanye kutanga kwako bhizinesi.
Kazhinji kutaura, iyo inokurumidza nzira yekutanga bhizinesi rako ndeyekutanga kubva pasocial media. Iwe unogona kusimudzira yako chigadzirwa nhasi hombe vateereri vevatengi kana kunyange shamwari dzako. Vachaita chigadzirwa saka nevamwe vangangove vatengi vavangadaro rova kambani yako uye uchibvunza rumwe ruzivo.
Iyi ndiyo yekukurumidza uye yakangwara nzira yekuvaka ramangwana uye wakanaka hupenyu. Sezvaunogona kutevera kambani yangu pamhepo uchaona kuti chikamu chedu chikuru Facebook uye Linkedin. Uye kubva ipapo isu tiri chaizvo kuwana vatengi vakanakisa kuti isu tinogona kuvaraidza uye kuvabatsira kuti vawane basa mukati Mubatanidzwa Arabhu Emeretsi.
Iwe unogona kuita zvakawanda sei paIndaneti?
online bhizinesi nokutendeseka haisi iyo inonyanya kubhadhara bhizinesi. Asi iyo ichaita maitiro ekuita anenge $ 5,000 pamwedzi kana iwe waizoshanda kutenderedza sere kusvika 10 maawa pazuva. Saka kana tikatora izvo uye isu tichafananidza rudzi urwu rwemari nebasa rakajairika. Zvirokwazvo iyi imwe yenzira dzakanaka dzeImani uye kutungamira hupenyu hwakanaka.
Online bhizinesi senge rekushambadzira bhizinesi kana bhizinesi rekuchera haisi iyo nzira yekugadzira mamirioni emadhora kana usiri kutungamira nhasi nhasi zano rakanaka rekubatsira vanhu kugadzirisa matambudziko avo.
Iyi kambani yakakwanisa kuita mazana emadhora svondo rega rega. Ipapo yaenda kuzviuru zvemadhora mwedzi wega wega. Uye zvazova bhizinesi rinobatsira kwazvo. Parizvino uye izvozvi bhizinesi iri kuenda pamusoro tsime uye iro harisi rakawanda basa kuita zuva nezuva. Nguva dzose inofanirwa kuitwa kuri kungoshandira vatengi nerukudzo uye kuvabatsira kuti vazadzikise uye vabudirire pabasa.
Zvakaipa zvakadini kuNai Marketing Marketing Company?
Yakawanda yenguva yako, mukadzi wako haaguti. Kutanga kusava nemhosva, iwe unomira kudya kwekudya kwekudya chakanyorwa nezve 15: 00 iwe unozogeza uye unozoona kuti hausati watosiya imbwa kubva zuro. Ipapo chikafu chichava pa18: 00 uye ichave hafu yebhodhi asi imbwa yako ichadaro kusasiiwa kunze inotevera nhanho hakusi kurara husiku, vavakidzani vanomira kukuudza Mangwanani uye vana vachashevedzera kwauri mumugwagwa kuti iwe uri Zombie.
Uye zvirokwazvo hapana kirimu ichabatsira chero simba remukadzi hazvibatsire uyezve zvatinotaura. Unenge usina mukadzi. Kana mumwe wako waunoda akabvunza iwe .. Chii chinonhuwira mumba mushure memashoko e15 kune vatengi.
Uye iwe uchiri kufanira kuburitsa email mune yako kana iwe pakupedzisira squint maziso ako kuti azvione pakutanga kwecorridor nekuti zvinosuwisa kuti iwe watove nematambudziko nemaziso zvakare kubva pakombuta.
Pane rimwe divi, iwe unounganidza pfungwa kuti utenge kutanga kubva kune yakasarudzika nyika iwe unotanga zvishoma nezvishoma kuzviziva iwe kuti mubvunzo upi wakabvunzwa nemukadzi wako musoro wako unotanga kuratidza kuti chii chingave mhinduro yekutanga.
Inogona kunge yakasvibiswa kubva muvhiki kupindura masikisi wechipiri seri kwevheti uye chaizvoizvo kupindura kwose nhamba 3 Iwe ndiyo imbwa.
Imwe neimwe inotevera nhanho inongowedzera kuva yakaipa, asi iyo nguva ichauya uye hauzofaniri kumirira kwenguva refu kana iwe ukaona kuti mamiriro eakaundi yako zvishoma nezvishoma anotanga kufamba, zvinoshamisa, haisi mari inotumirwa kubva kuna amai vako, unotanga kuona zvinoreva basa rako uye uone kuti yakagara pakombuta asi ichizowedzera uye yakawanda chibereko. Mushure menguva yakati iwe usingaone yako yebasa anoiverenga ini newe kuti chigadzirwa chako uye webhusaiti yako zviri kutanga kuwana chinzvimbo chiri nani muGoogle rankings.
Uye zvechokwadi vanhu vari kukutsvaka uyezve vanhu iwe vaunoda izvo zvaunofunga kuti kune vanhu vazhinji vakafanana newe. Uye ivo vakafanana newe handireve Zombie. Saka, vanhu vari kutsvaga chigadzirwa chaunokwanisa kuvapa kana sevhisi uye uchaita mari online online mubhizimusi rako.
Uye ino inguva iyo iwe pakupedzisira unomuka kubva pakombuta iyi. Unosimuka kubva pakombuta, simudza mapofu mukamuri unonzwa kunge semwaranzi yezuva inongoerekana yabata kumeso kwako uye iwe unoona kuti zvaive zvakakodzera pese min.
Une webhusaiti yakanaka chaizvo, yakanaka bhizinesi, uye zvinonyanya kukosha ndiwe mukuru pane zvese zvawakagadzira iwe chete mukadzi wako uye hapana anokwanisa kuzvitora, iwe uchatotadza kurasa peji, ruzivo rwako rwehunyanzvi. unazvo ichakutendera iwe kuti ugadzire rimwe bhizinesi hombe.
Nei Dubai iri So Guru yeSeO Jobs?
Dubai ndiyo nzvimbo yakakura kwazvo yaakamboigadzira nevanhu veumwe munhu. Ndokusaka kambani yedu iri kubatsira varipi vashandi ivavo kuti vawane basa idzva mukati meUnited Arab Emirates.
Tende redu kusvika ikozvino rakabatsira zviuru zvevanhu pasi rose. Kazhinji isu tiri kushanda nemaIndia vanhu uye vanhu vanotaura mutauro wechiArabic uye Farsi mutauro. Saka kana uchigara kuEurope kana kuUnited Arab Emirates isu tinokwanisa kukubatsira uye kupa basa rako mudunhu reGulf.
Dubai guta rakakura nzvimbo nekuti iwe unogona chaizvo kuwana chinoshamisa basa uye kusimudzirwa chaizvo chaizvo. Imwe poindi yakanaka ndiyo inonyanya nzvimbo for expats ndizvo izvozvo ino nzvimbo yakanyatsonaka kuwana mutambo webasa nekukurumidza pane imwe nzvimbo iri kuGulf.
Icho chiuru chemakambani zvakanaka iwe unogona chaizvo kuwana basa uye kubatana nevamwe vanhu. Semuenzaniso iwe unogona kujoina yedu LinkedIn mbiri uye ini ndichaita Facebook kambani peji. Nekutevera yedu nhoroondo yekambani iwe unogona chaizvo tora inonakidza mabasa anopa uye unganidza nemutambo vanhu vazhinji vari kutsvakawo basa sewe iwe.
Iyi kambani zvakare yakanaka brand Dubai pane yavo webhusaiti iwe unogona kutaurirana zvakanaka uye iwe zvakare unozevha hey 2 uone zvavari kunyatsoita maererano neshoko bhizinesi. Kushanda nekambani ino Yezvimotokari mukati Dubai rakasiyana kumeso munzvimbo yeGulf iyo ichakupa iwe nzira yekutanga yemusoro wako yeramangwana rudzi rwekuvandudza vatengesi vakuru kana dhipatimendi reinjiniya.
Atwell based kambani iri muDubai guta. Ichi chigadzirwa chakakura chena playset nyika bhizinesi. Zvakare sangano iri rinenge richirovera vanhu kutenderedza. Saka kunyangwe kupi iwe unobva chaiko iwe uchiri kuwana basa navo. Sezvo isu tese tinoziva 80% yevashandi vekubasa iyo iri kuuya ichibva kuIndia nePakistan. Ichi chikonzero nei zvisinei kuti iwe uri kunyatso kuyedza kubva kuDubai. Iwe uchine mukana uye ndapota shandisa pawebhusaiti yavo. Kuti inokupa Haygood nyowani nyowani muDubai.
Iyi mhando ndeyechokwadi yakasarudzika brand uye vazhinji vevashandi ini handikwanisi kuwana basa navo. Nekudaro, kana iwe uchinge uine ruzivo rwakanaka saka iwe zvechokwadi uchave uine sarudzo uye iwe uchave uchikwanisa kuti awane basa ne ipapo. Aya makambani anonyatsoita basa rekutapa vatariri vehunyanzvi uye CEO.
Saka kana iwe uine ruzivo uwane mukana wekushanda nemakambani akadai seichi. Pane chinongedzo chakapihwa pamusoro uye ndokumbira utaure pamusoro pacho uye ipapo vanozokutora iwe mberi pane chikamu chebasa. Ndinovimba iwe uchawana chinoshamisa basa rakabatana States neiyi kambani.
Super rinozivikanwa sangano. Iyo internet inoongorora inongoda pane ino kambani. Saka iwe uchawana mukana nemhando yepamusoro semhando iyi. Kazhinji, makambani anomotokari anogara achipa mibairo yakakura kwazvo kune vashandi vavo. Uye iwe unogona nguva dzose kutarisira kune rumwe rutivi kudzidzisa kwakanaka uye nekumira zvakanaka kudzidziswa kwayo.
Saka kutsvaga chishandiso chedu chitsva chinhu chakanaka chevanotsvaga basa uye vanhu vari kunyatsotsvaga neema network network. Kazhinji kutaura, kana uri kutarisa kubatana nevanhu mukati meDubai. Shandisa yedu chishandiso uye kukoka chengetedza poop kubva kune yako email rondedzero. Isu takagadzira hurongwa hwakareruka. Saka zvese zvaunofanirwa kuita muchokwadi ndezve kungoenda kuGmail kana Hotmail. Wobva watumira maimeri kubva kune yako email rondedzero.
Mushure mekuti muratidze kushoma kwekubatana mukambani yedu kukoka chero munhu zvishandiso. Iwe unozotumira kukokwa uchiziva iwe vice City kambani. Saka vamwe vanhu iwe kusaina kuDubai kana uri kunyatsogara muUnited Arab Emirates.
Pane mukana mukuru. Vamwe vanhu vanogona farira kujoina Dubai kambani yeguta. Uye zvese zvaunofanirwa kuita ndezve kungovapa mukana wekuzviita mune Smart nzira nekushandisa yedu masevhisi ekambani. Kana tikatora 4 semuenzaniso munhu akajairika ari kuita 300 kusvika kune vanhu ve500. Munhu wacho aizo kukoka kwavo shamwari kune yedu webhusaiti. Ipapo zvingave zvakakosha chaizvo kuti munhu apinde webhusaiti yedu.
Nekudaro, iyo yakangwara nzira yekutora uye kukoka shamwari dzako kuDubai. Iri kuenda kune LinkedIn mbiri. Uye ipapo iyo inzira iri nyore yekuendesa shamwari dzako nhengo dzeBTS uye wobva wangotumira kokero kwavariwo. Saka nenzira iyi iwe hauzongowana yako chete asiwo kubva kumagariro enhau. Izvo zvaizokubatsira chaizvo kuvaka mhando yako uye kuratidza mumagariro enhau zvakare.
Dubai guta kambani chinangwa iri kubatsira vanhu kuti vabatane gulf mudunhu. Saka kazhinji kutaura kana iwe uri kutarisa kubatana nevanhu vanofarira Mubatanidzwa wenyika dzeArab Emirates, Saudhi Arabhiya uye Kuwait. Yedu kambani ndeye yakakwana yakakodzera 4 kune zvaunoda.
Nice-risingagumi Vintage Leopard Yakadhindwa Inoshanda vestidos Cold Makeer ne Bow Bhizinesi Party Partycon Office Hofisi Vakadzi Vanopfeka B483
Rated 5.00 Kunze kwe5 yakavakirwa 20 kasitoma ratings
Nice-risingagumi Vintage Yakashongedza Ratidziro Ruvara Patchwork Kupfeka Kuti Tishande vestidos Bhizinesi Party Hofisi Vakadzi muviri weChipfeko B463
5XL 6XL Autumn Plus size Plaid Dress 2019 Nguva yechando Vakadzi Vakawanda Vakakura Kukura Vanopfeka Mukadzi Hofisi Hofisi 4XL Yakakura Kukura Kwemitezo Yemapati
Kurarama Tariro chinhu chikuru mukubudirira. Saka ngetariro iwe unokoka zvakawanda kune kambani yedu uye vabatsire kuti vawane basa kuita mamwe mafambiro ezve social media muDubai guta. Ndokumbira usakanganwe kugovana uye sekutumira kwedu. Saka ndozvinoita nzira shamwari dzako dzichakwanisa kuona zvauri kuita online uye nekunetseka kwauri kuyedza kuwana mabasa muDubai.
SEO uye basa Mukushambadzira mubhizinesi rako? Ndakatanga basa rangu rekushambadzira ndiri mudiki. Pazera re21 uye nehafu makore, ini ndakatanga bhizinesi rangu rekutanga online.
Unoziva chii chaiva kambani yangu yekutanga?
Yaive Led Multimedia. Ini ndakagadzira kambani nekuti ini handina kugona findiro rinobhadhara zvikuru pazera rino. Nom, ndakaedza kuwana basa rakabhadharwa chaizvo muEurope uye kuMiddle East !.
Sezvaunogona kufungidzira, zvakakundikana, chokwadi chakandiwana uye ini pakupedzisira ndakaisa mari muLed skrini.
Taida LED zviratidzo kuti tive nekutengeserana pamakona makuru. Uye kukurudzira makambani makuru Mukudzingisa ... urongwa hunoenderera mberi.
Ipapo ndakarasikirwa neA250,000 USD
Asi kana ndaifanira kutanga zvese kubva pakutanga. unofunga kuti ndichaitei?
Ndisati ndasvika pane izvo, ngatitangei kutaura nezve izvo zvandakawana kusvika nguva pfupi mukushambadzira kwangu basa muDubai…
Chii chakaitika Ini ndinodzidza ndanonoka pabasa rangu? Webhusaiti kumira panzvimbo inonzi SEO. Saka ndinobvuma kuti ndakanyatsogona pachinhu chimwe chete uye chinhu chimwe chete. Mukushambadzira kweInternet
Iye zvino ndava kutungamirira webhusaiti yepamutemo kune vatengi vangu.
Izvo zvose zvinoenderana nedzimwe nzvimbo iyo nzvimbo yacho iripo, ndinogona kukwezva motokari kune iyo ndoita kuti ive yakakurumbira. Uye zvakanakisisa pane zvose, ndinogona kuzviita pasina kushambadzira.
Asi nekuti ini ndinogona kuita chinhu chimwe, hazvireve kuti ndinogona kugadzira bhizinesi rakabudirira. Ndakaona nezvazvo mu2015. Ndichiri kuda vanhu vanoshamisa vandikomba.
Zvakanaka, mushure mekutanga kudonha kwekambani yangu yekutanga kushambadzira. Ndafunga kuve maneja, ini akaenda kuUS.
Ndakawana chinzvimbo chemaneja kuIreland, ndikazoenda kuLondon. Mune rimwe remakambani emari, ndakawana dzidzo mukushambadzira.
Vanhu vakagadzira Disneyland vakauya kwatiri. Ndakadzidza ipapo maitiro ekuvaka rekambani yekambani yepasi rese.
Semuenzaniso, pandakatanga kushanda neDubai Marketers, mini yangu bhizinesi rakatanga kukura.
Zvadaro ndakawana nezve 350,000 USD
Kutevera kutungamira uku, ndakavaka kambani yepamhepo mu Dubai. Zvisinei, ini ndakanga ndisingazive kuti ndozvisimudzira sei ?. John West akauya nepfungwa yekutsvaga vanhu vanofarira basa rangu.
Ndakagadzira Dubai City Company pa Linkedin
Ndakakwanisa ndikatanga neInternet Marketing. Yakagara kweanenge mwedzi ye6. Uye zvinopesana neiyo yakasikwa nzira yematrix. Kambani yangu akatanga kuwana chaiyo mari.
Zvadaro ndakagamuchira My First Million USD
Ndakaita mari yakawanda mukupfuura gore. Chii chaunogona kushandisa mari yakadaro pane? maresitorendi anodhura, mota dzemitambo, nzendo dzekunze, Quads uye yakavanzika nzvimbo mune SPA yemhuri.
Ndakava mutungamiri mukuru wechikamu chemari yezvemari, kazhinji hapana munhu wandinofanira kuita.
Vafumi kana vasina nguva, vachawana mumwe munhu achazviita.
Iwe unoona, vatengesi vazhinji, vatungamiri vebhizimisi havana dzidzo uye izvi hazviwanzovi vatungamiriri vakuru.
Vazhinji vavo vakanyatsonaka mukuvaka maqembu akasimba nekubhadhara vanhu vakarurama.
Uye kupfuura zvese, vanogona kuzviita nemari shoma.
Uyu ndiye unyanzvi hwake hwakanakisisa!
Ini ndanga ndichishanda nemaneja epamusoro kubva kuLondon neDubai
Kushanda nevatungamiriri vakanakisisa kubva London, Dubai, New York. Ndakakurumidza kuona kuti pasinei nokuti wakachenjera sei, hauna kumbovaka kambani huru kunze kwekuti iwe uine tarenda rine tarenda.
Ehe, iwe unogona kusvika kumamiriyoni iwe pachako, hachisi hofori mukushambadzira. Asi zvakaoma kuwana, toti, 500,000 madhora, kana kunyange 1,500,000 dirhams pagore mune mapato pasina anoshamisa kutengesa uye kushambadzira timu.
Ehe, vanhu vachakubatsira iwe nekukurumidza kuvandudza rako bhizinesi. Taura pachena, uine simba rakawanda, uchifunga kuti unosarudza vanhu vakanaka, gadzirisa matambudziko nekukurumidza uye uone mari kubva pamari.
Saka ndaizoitei dai ndaifanira kutanga zvakare?
Zvakanaka, chidzidzo pamusoro pehupenyu chimwe chezvidzidzo zvakaoma kwazvo zvandaifanira kudzidza. Uye ini ndakazvidzidza ndakanonoka pabasa rangu.
Ndinofanira kuzviita here pazera remakore e18?
Zviri pachena, asi kana iwe uchitanga seyemabhizimusi mudiki kana mukuru, iwe unokanganisa (dzimwe nguva wakakura) izvo iwe ungangodaro usingaiti kana iwe ukatanga rwendo rwako rwemabhizimusi rwendo zvishoma gare gare.
Zvakanaka, ini ndaizoshandisa yekutanga 9 makore erwendo rwangu rwemabhizimusi pakati pemakambani ari kushambadzira ekushambadzira.
Kwemakore matatu ekutanga, ini ndaizoshandisa nguva yangu mune yakanaka incubator yeEquitorurship neTekinoroji. Uye zvakanak kuti ini ndisina mari yakawedzerwa yekuwedzera. Nekuti mapurojekiti akadai akaoma uye haatangi sechikepe chedombo.
Chikonzero nei ini ndisingasarudze bhizinesi diki rinokurumidza kukura nderekuti iro rakanyanya kuomarara ndiko kushanda kwekambani.
Nekuda kwechikamu chinotevera mukukura kwayo. Kushanda mukambani ine zvinoshamisa kudzvanywa nekuda kwemapurojekiti yenguva kana kusafara.
Iwe haugone kuda kana kudzora chimwe chinhu, chinogona kungodzorwa mukambani yepakati. Iyo yekutanga fomu inodzidzisa iwe hunyanzvi uye kurwira kukunda.
Kutanga bhizinesi iwe uchadzidza hupenyu hwebhizimisi.
Mushure memakore ekutanga e3 apedza mukambani diki, ndaizopedza makore maviri aitevera ndichishanda mukambani yepakati nepakati muUS kana London. inowana inosvika DH 10 mamirioni uye inokura sebato muhurumende mushure mesarudzo.
Izvi zvichakubatsira iwe kuti unzwisise zvinoita sekambani inokurumidza kukura. Saka rega iwe uve mutambi wekutanga. Asi. zvechokwadi achakuudza kuti bhizinesi harisi zvakanaka, zvakasviba uye zvakaoma.
Zvadaro pane canola yekuderedza
Saka zvinhu zvakawanda zvinokundikana, zvakwegura kuva mutungamiriri uye iwe unoputsa nokuti uri kukura zvakanyanya mukuda. Unyanzvi hunoda nguva nekurwa.
Ehe, iwe unogona vachiri kudzidza zvinhu zvakaita sehupfumi, kana iwe unogona kushanda nevanhu vakaita sekutengesa uye manejimendi. Asi pano iwe unofanirwa kutanga kuita basa rakawanda.
Mushure memakore anotevera e2, iwe unofanirwa kushandisa makore 2 uchishanda mune imwe kambani yakakura pakati. Zvakawanda kana zvishoma, kambani inogadzira mari inosvika zana remamiriyoni emadhora pagore, asi isingasviki bhiriyoni Dirham.
Makambani epakati Pakati akasiyana kubva pane kutanga!
Iwo mapurojekiti akatarisana nemakambani epakati-epakati dzakasiyana nemakambani madiki nemakambani makuru. Asi kuve mumusanganiswa mune imwe yemakambani aya, kwemakore mashoma iwe unodzidza zvese kubva mukubata nazvo zvematongerwo enyika, kugadzira kambani inononoka kugadzira, kunyangwe kufunga nezve mufananidzo mukuru.
Saka makambani akakura sei, semuenzaniso, Dubai neLondon anotarisa misika mikuru, nekuti ivo vanoziva kuti zviri nyore kuve ne10% yeindasitiri yakakosha akawanda mabhiriyoni ezvehams semuenzaniso muUAE pane kuva ne50% yeindasitiri yakakosha mamirioni mazhinji ezlotys muEurope.
Makore ekupedzisira a basa rangu rounyanzvi, Ndaizoshandisa mubatanidzwa wakakura saManeja kana mutevedzeri weMutungamiri. Kana ndati "hombe"
Chii chandingaita pashure pemakore e10 ekushanda semushandi?
Icho chinangwa chose chekushandira mamwe makambani kana vanhu vakangwara kwazvo kuwana varapi vekutapa uye dzidza chairo bhizinesi
Bhizimusi harishandi sekufunga kunoita vanhu vazhinji. Kubudirira kuri nyore kuita uye zvinoita sekunge iwe unogona kufunga nezvevazhinji "vanobudirira" pesvedzero pa Instagram. Kazhinji ivo vanoonekwawo muTV, ivo edza kuzvitengesa paredhiyo kana terevhizheni.
Iyo poindi ine chekuita nebasa rekushambadzira
Bhizimusi, kambani yeako uye chinzvimbo mawebhusaiti muAFA anotaridzika chaizvo uye zvinoshamisa. Ini ndaisazochinjanisa imwe hope.
asi usati waenda uye kuva muzvinabhizimusi, dzidza kubva kumakambani eese saizi.
Kuva a CEO haisi nzira iri nyore, uye chekupedzisira chinhu chaunoda kuita ndechekutadza nekuda kweusimbe hwako nekuti mukurumbira wako ndewako zvese zvaunazvo.
Kushanda mumamiriro ezvinhu akaoma kwemakore mashoma mumakambani evamwe vanhu, iwe inowedzera mikana yako kana kubudirira mukambani yako.
Uye kana wakagadzirira kubuda uri woga, ngatitarisirei!.
Yakanga iri sarudzo yekuchenjera kutanga nekutanga inoshamisa co-founders pakuvaka kambani nekuti inotora yakawandisa nguva uye capital kuzviita zvese uri wega.
Iwe ungaitei kana iwe watanga zvakare zvakare?
Basa rekushambadzira uye SEO
Dana nhasi uye uronga runyora rune rusununguko isu tichataura pamusoro peZviitiko zvako!
Ngatitaure nezvebhizimisi renyu!
Iko kumiswa kweiyo Dubai City Mapeji pamusika wemuno. Vedu vadiwa Vanhu veDubai vanogara mune rimwe guta chairo. Zvakanaka, zvakapatsanurwa kuita zvikamu zviviri zvevagari. Dunhu rekutanga revagari iboka rinoshanda mune yunifomu masevhisi muDubai, semuenzaniso mumauto zvikamu zvemoto brigade uye Mapurisa.
Iri boka rezvemagariro rinobudirira zvishoma nezvishoma saka unoda kuongorora kuti chigadzirwa uye sei iwe unoda kuisa webhusaiti yako.
Isu tiri mutungamiri wekutengeserana inoshandiswa iyo ichakubatsira kuti unzwisise kuti kutengeswa kwekambani kunoshanda sei paGoogle. Hauzozvidemba kana iwe uchatipa mukana uye tumira nhamba yefoni pasi apa.
Website Marketing - Ndichakubatsira kukurudzira Positioning uye SEO in Dubai City
Kambani yedu inoshandira hunyanzvi hwekugadzirisa kumiswa kwemawebhusaiti kwese kwese munzvimbo yeGulf. Dubai uye Abu Dhabi idhorobha rakanaka kwatiri nekuti takaita makore mazhinji pano, tinoziva zviri kuitika muuswa.
Parizvino, akawanda emakambani matsva ari kuvandudza mumusika weAEE, semuenzaniso, imba yekutandarira, mabara akakodzera uye zvitoro zvezvipfeko.
Zvakare kana uchida kurova mapeji ekutanga muQatar neKuwait. Makwikwi acho haazove akakura uye mikana yebhizimusi rako ichave yakakura kwazvo nekukurumidza iwe pauchatipa mukana wekumisikidza webhusaiti yako muPamusoro 10 Google.
Dubai imusika wakanaka kwazvo kana zvasvika kune basa revatengi. Vatengi vedu vanowanzo bvunza isu neruzivo rwekuti vangamisa sei webhusaiti mu Abu Dhabi pane yemunzvimbo yechiArmaki marker.
Nekuti musika uyu hausi kure uye kuti munhu wese anoziva sei Dubai ndiro guta rakakura kwazvo kana zvasvika pakuvandudzwa kwetekinoroji muUAE.
Iwo makuru makambani ane mahofisi avo pano, semuenzaniso, Orange uye Microsoft. Zvakare chinzvimbo yako mhando muUAE chikamu chimwe chete icho chatinopa vatengi vedu nguva dzose.
Uye chikamu chechipiri inobatsira mukusimudzira zvigadzirwa zvavo pamusika weDubai Arab. Kambani yedu yakabudirira kusimudzira mazana emakambani mukati Porendi, US uye Kanadha. Isu taishandawo pamusika wepasi rose, kusanganisira Dubai, England neLatin America.
Positioning of Dubai Sites - Nesu Tichava mu Top 10 Google!
Yedu yekumisa iyi inotevedzana zvishandiso kuvonga kune yako webhusaiti mukati Dubai ichaonekwa mune yekutsvaga injini. Nekushandisa kambani yedu iwe unenge uine chaizvo nyanzvi yakaitwa yekumisikidza webhusaiti.
Kana iwe wanga uchinetseka kuti ungaita sei kuti kambani yako ivele muPamusoro 10 kuGoogle, tibvunze kuti tiise webhusaiti yako. Kambani yedu ine dzimbahwe rayo muDubai uye inopa yakanakisa kumira mawebhusaiti kwete chete munharaunda yeGulf asiwo muPoland, United Kingdom uye nekune dzimwe nyika dziri kure seIndonesia.
Tingaita sei SEO kwauri mu Dubai?
Kambani yedu inoshandisa chete dzakaratidza yakachengeteka nzira dzekuisa Dubai. Isu tinogara tichivimbisa iwe mibairo yakakwira uye nekubudirira kwakanyanya pakumisikidza pamazwi akanakisa mumakinjini ekutsvaga akadai saYahoo, Bing uye Google. Kambani yedu iri kuyedzawo kubatsira vatengi vayo mukusimudzira zvigadzirwa zvavo pasocial media.
Pane rimwe divi, Dubai yakawana mwenje wakasvibira wekuwedzera kweMaxima, mapurojekiti matsva evamwe vatengi. Isu chirongwa chedu chitsva chemunharaunda chinosanganisira cinema munzvimbo yedu itsva.
Tinokukoka kuti uone kambani yedu paGoogle. Ingoipinda muDhailand City Company uye svetuka zvakanyanya zvakanaka mukuisa mawebsite.
Semuyenzaniso, isu taibata pane akadai maNaukri Gulf se Facebook kana LinkedIn uye kunyange Twitter. Dubai City Kambani yakabatsira mazana evatengi ari padyo newe mazuva ese, kugamuchira ruzivo uye zvigadzirwa zvitsva zvekumisa mawebhusaiti muDubai.
Tichakuvakira bhizimisi rakakura kwauri paIndaneti!
Boka redu revanyanzvi paDubai Career Market. Kugadzira Google Map bhizinesi kadhi rako, hongu. Isu tichagadzira yako webhusaiti pane Facebook ne Twitter. Isu tichakubatsira iwe kutumira iyo yakakosha email email kune vatengi vako vatotenga chigadzirwa chako.
Kana iwe ukafunga kushandira pamwe nesu, tinokupa mhinduro dzakasiyana siyana kuti ugutsikane uye kuti kambani yako pakupedzisira painotanga kuunza purofiti uye iyo yaunofungidzirwa kuti ibasa rakaoma. Isu tinogara tichipa tsika mhinduro kune vatengi vedu, semuenzaniso, kushambadzira kushambadzira paFacebook kana kunyange kubatsira mukuwana vateveri pa Instagram.
Kambani yedu yakavambwa makore mazhinji akapfuura naJohn West kuDubai. Kubva ipapo, isu tine chaizvo yakakura portfolio yemakambani uye edu ebhizinesi vatinoshanda navo. Pakati pezvimwe zvinhu, muKrakak, Wroclaw uye Poznan.
Tinovimba kuti muchatipa mukana wekukubatsirai kuwedzera bhizinesi renyu remauto. Makatiwana muinternet yekutsvaga injini saka fungidziro dzinogona kutaura kuti takavimbika uye nekushanda nesimba. Mabasa eDubai anogara achivandudza uye pamusoro pe30% yemakambani matsva anovhura mahofisi avo kunze kwedunhu reDubai.
Kushambadzira Chikoro - Unogona kundiwana Online!
Dubai yedu ine bhizimusi rakakura chaizvo uye rinogona kuita hupfumi. Maererano neGoogle neFacebook, mukati mevhiki, pamusoro pevanhu ve150,000 vanowedzerwa kuguta sevashandisi venzvimbo dzekudyidzana. Zvekare, zvakakosha kufunga nezve kutonga mambo internet imwe kambani isati yakuitira iwe. Saka mukati Dubai, zvichiri kugona kutora musika nekuti makwikwi haasi akawandisa semuenzaniso kumatunhu eSharjah kana City pakati. Kwe 5 kusvika kumakore 10 kubva iwe waverenga izvi Blog. Zvinonyanya kuitika, makambani anopa zvigadzirwa zvavo anotonga musika.
Wedzera kambani iri the UAE pamwe nesu!
Saka iwe semabhizimisi unoda kambani inokurudzirwa inoziva kuvaka bhizinesi paIndaneti. MuA Dubai, zvakawanda zvemitambo mitsva nemitambo yemitambo zviri kusikwa nguva dzose.
Saka kwete chete vanonzi vekwavo uye ivo vachazofarira chigadzirwa chako. Asi zvakare vanhu vanouya pano kumutambo kana kurwira bhokisa kurwa izvo zvinowanzoitika munzvimbo Brazil Arena.
Zvakare, iwo maonero enguva yakakodzera kutora nzombe nenyanga uye kuisa makambani paInternet muDubai. Chinangwa chikuru icho kambani yedu chichave chiri kukuisa iwe sekambani inotungamira mumusika weAEE. MuEmirates Kune nzvimbo zhinji dzaunogona kusvika kuburikidza neInternet, semuenzaniso Arena Dubai yemitambo yenzvimbo. Zvadaro, chiteshi cheguta pane nzvimbo ine simba yekukurukurirana nzvimbo uye Nhoroondo Museum uko kazhinji vechidiki vanouya kunzvimbo dzechikoro nzendo.
Iko kumiswa kweMakuru eDubai - Zvipe iwe mukana wekuti uoneke mune chaiyo nyika. Chinjana bhizinesi rako kune internet uye tanga kuhwina vatengi online. Wedzera kutengesa kunowedzera purofiti.
Kuderedza kurasikirwa mukati Dubai. Iva bhizimisi redu shamwari mu Dubai.
Positioning yeDaily Pages? - Ndizvo chete nekambani yedu!
Isu kambani yakatendeseka yaunogona kuvimba nayo zana nezana. Kana iwe uchida kutaura uye ukawana zvimwe kana kuti une zvimwe zvaunotarisira zvatinofanira kuziva nezvazvo. Dubai City Company rinokukoka kuti utaure nevamiriri vekambani kana kunyange muridzi.
Tichapindura zvechokwadi mibvunzo yako yose. SEO yedu neTeamente team ichakubatsira kusarudza yakanyanya kuwanda kana yekutanga nzira yekushambadzira yekambani yako kuvandudza. John West anozopa zano pamusoro peKuwana vatengi kubva internet. Isu tiri kukanda zvishoma kushambadzira kwepamhepo paUnited Arab Emirates, Dubai Online kushambadzira musika. Uye zvechokwadi unonakidzwa nevatengi vatsva.
Iwe hausi kuzoodzwa mwoyo mukubatana nesu. Tinogona chete kuwedzera kwauri kuti isu hatisi vadiki IT nyanzvi, isu tese tine mhuri uye isu tinoziva zvazvinoreva kuva nemutoro uye kuvimbika mukushanda nevatengi. Saka kana iwe uchida kuisa kambani yako nemaoko akanaka, tinokukurudzira kuti ubatane nevanhu pamusoro pe30 nekuda kwezvikonzero zviri pachena.
SEO kubva muboka redu? Dana nhasi uye uronga rukudzo rusingabhadhari!
Yakarongedzwa naJohn West - Google Kushambadzira - Isu tinotanga SEO mu2009!
Marketing paGoogle! - Bhuku re Dubai City Company rakangotanga. Bhuku redu richave rakakwana maererano neSeO neInternet Marketing paGoogle uye Social Media. Ichaita kuti vanhu vabatanidzwe pakuisa mawebsite kuti vachinjana maonero nemafungiro pamusoro pe SEO.
Tinokukoka iwe kuti uwedzere mhinduro, mibvunzo uye curiosities. Chii chatichazo kunyora pamusoro pebhuku redu?
Pamusoro pezvese zvinobatwa neDubai City Company mukati meEurope, London, Emirates uye US Izvo zviri pamusoro pekugadzirisa mapeji paGoogle. Paid AdWords kushambadzira, kugadzirisa mapeji muGoogle mamapu. Isu tichataura zvishoma nezve nhau kubva kune nyika yemagariro enhau.
Tichaedza kukutsanangurira iwe zvishoma ruzivo nezve chimiro chemafuta ekutsvaga muPoland uye Mashambadziro anoshanda sei paGoogle.
Nyanzvi dzedu dzichashandisa ruzivo ruzivo uye nzira dzinoshandiswa zvakajeka uye mazano ekuisa nzvimbo mawebsite munharaunda, sekuti ungamisa sei webhusaiti muLegionowo? Uye pamusoro pehutano hwakabatana nekutengeserana kwekambani uye kutengeserana kwepanzvimbo Muchidimbu - pamusoro pezvatinoda zvikuru
Pasi paunodzidza kushandisa mashandisi ekutengeserana mabhii uye Kukurudzira bhizinesi yako paIndaneti mumusika wekune dzimwe nyika. Tichakupa ruzivo pamusoro pekuisa mawebsite. Uye isu tinotarisira kuti iwe unonzwisisa kuti kutengeserana kwekambani kunoshanda sei uye zvipi zvishandise zvaunofanira kushandisa kuti utange chaizvo kutambira kwako nekutengesa paGoogle.
Tanga kutarisa webhusaiti!
Vaka yako kushambadzira career in Dubai!
Google Marketing inofanira kugoverwa mumasangano akasiyana e-13. Asi tisati tasvika kune izvi ndichakunyorerai zvishoma nezveiyo Google iri uye chii chinonzi Internet injini injini. Saka Google, pasinei nemafungiro asina kunaka, ndiyo Injini yezvinyorwa uye kwete yebhizimisi yekutsvaga injini. Kutengeswa kweGoogle hakusiwo kushandiswa kwezvikwata pane injini yekutsvaga. Saka kana tichitaura nezvekutengesa kwakachena paGoogle, iri kukurudzira zvakakunakira kune vanogamuchira vanofarira. Uye ndizvo zvatinoti Google marketing.
Kutengesa paGoogle zvakare kuongororwa kwevashandisi ve data. Semuenzaniso, Nzira yekuongorora dhese uye kushandisa Google Analytics. Kuti uwedzere nzvimbo dzebhizimisi rako rekuInternet. Nyaya inotevera yemusika paGoogle ndeyokuunganidza uye kuongorora dhidhiro yemashandisi kuti iite kuti ive ruzivo ruzivo runogona kukanganisa kubudirira kwebhizimisi rako.
Nha. 1. Google Analytics uye kuongorora kwedata
Iwe wakanzwa ruzivo pamusoro peGoogle Analytics chinhu chinoshandiswa nevatengesi kutarisa chitima kunzvimbo yako kubva kune zvakasiyana siyana. Google inopa chigoni chaunogona kutarisa nhamba yevanhu varipo pawebsite yako. Pakati pezvimwe zvinhu, nguva chaiye, uye saka unogona kutarisa mahedheni, nzvimbo, nzvimbo dzekushanyira, zvinyorwa, zviitiko kana kutendeuka kunobva kunzvimbo dzeGoogle kana matangazo kana mamwe mawebsite.
Kuwedzera webhusaiti yako kuGoogle Analytics unofanira kuva neGoogle Gmail. Iwe unogona kuzviita pasi apa chingofa pane pamufananidzo.
Zvadaro tinopinda nekombiyuta yedu yeGoogle Analytics uye tinogadzira nhoroondo itsva kuti tiwedzere nzvimbo yedu.
Kana tangogadzira account muGoogle Analytics, tinobva tora kutonga. Kuti utore pasi kodhi iri inowanikwa pane webhusaiti yeGoogle Analytics uye ibatanidze newebsite. Izvi zvinotibatsira kuti tibatanidze uye titarise vatengi vedu kuti vatore data nezvekugara kwavo pawebsite.
Uye zvichibva pamigumisiro yatinowana muGoogle Analytics, tinokwanisa kuona kana muchengeti anoda webhusaiti yedu kana kuti kutarisa uye kusiya. Google inofunga kuti paavhareji mutengi anofanira kugara kweminiti kana zvakadaro panzvimbo yedu yepaiti kuitira kuti injini yekutsvaga ione kuti inokosha mutengi.
Zvadaro, tinotora kodeji yekutsvaga yatinotora kubva kuGoogle Analytics
Zvakanaka, saka tine Google Analytics kodhi iyo inoteedzera munhu wese akashanyira webhusaiti yedu. Iye zvino yave nguva yekuwedzera iyi kodhi kune webhusaiti yako. Mazhinji ewebhu webhusaiti anoshandisa WordPress sepuratifomu pane iyo kuvaka webhusaiti. Kunyanya nekuti yakanyatsochengetedzwa uye inowanzogadziriswa.
Nguva dzose yeuka kutengesa muGoogle, uyewo kuongorora kwemashoko kubva kunjini yekutsvaga.
Saka, tinoshandisa main WordPress menu. Wedzera purogiramu itsva. Zvadaro tinotsvaka imwe yeiyo pasi apa yakasarudzwa plugins.
Zvakanakisisa ndeye: Google Analytics Dashboard yeWP neEexactMetrics (yaimbova GADWP)
Isu tinoisa uye tinoshandisa plugin mu wordpress
Fadza, purogi yako inofanira kunge yava kushingaira mu wordpress. Kubvira mangwana unofanira kukwanisa kutevera vanhu vose vanoshanyira webhusaiti yenyu.
Kutenda kuGoogle Analytics, unogona kutarisa kuti vatengi vauya kupi webhusaiti yako. Hazvirevi kuti inobva kuGoogle, inogonawo kubva kune mamwe majini kana kubva kune izvo zvinonzi zvakananga zvinyorwa, somuenzaniso kubva kumakambani ekutengeserana kana mumwe munhu akanyora zita rekambani yavo mune injini yekutsvaga uye akangopinda zvakananga.
Nha. 2 Business Yakakodzera kufanirwa neGoogle
Saka iwe unokwanisa kutarisa kuti vangani vachipinda uye vobva pawebsite yako. Iye zvino tinoda kusarudza nzira yekutengesera yakakodzera yekambani yako. Kuzvidzivirira pane zvaunotengesa kana Ndezvipi zvese zvaunopa kune vatengi vako. Iwe unogona kusarudza kubva kune zvakananga kutengesa, kutengeserana kwepaIndaneti, zvekugarisana nevamwe kana imwe nyaya inokurudzira bhizinesi rako pane mamwe mawebsite.
Nzira yakanakisisa yekutengeserana yakasikwa yakanyanya nyore. Iva nechinangwa chiri nani kupfuura mamwe makambani. Kunyange kana iwe uine chiziviso chakanakisisa munyika uye chigadzirwa chako chiri chakanaka cheGoogle ichazviziva. Sei vanhu vachitsvaka kambani yenyu, semuenzaniso kubva pamatsetse. Ndakatenga motokari kubva kumakambani uye kuti ndingadzorera sei motokari kune kambani iyi. Icho chave kutoratidza kuti injini yekutsvaga kuti chimwe chinhu chakaipa nekambani yako.
Zvinyorwa zveElon Muska: kuvaka Tesla, akafukura chikamu cheMercedes CLS
Saka usati watanga kukurudzira bhizinesi rako Funga zvakanyanya pamusoro pekuvandudza webhusaiti yako kana zvigadzirwa. Shamwari yangu, iri Dubai City Company makore akapfuura, yakawira pamusoro pokuti yakanga isingakwanisi kugadzirisa dambudziko ripi uye rakapiwa mari chete uye mari mukutengesa kwetaneti. Saka sezvamunofungidzira pakutanga, hazvina kundipa zvakawanda. Kukurukudza kwepamusoro zvinhu zvose zvakanaka, asi nengozi chigadzirwa chacho chakanwa. Pashure penguva yakati, nhamba yakatanga kutsvaga mamwe makambani ekutsvaga injini uye iyo makambani akaenda kumusoro paGoogle.
Zvakare, kupfupisa chigadzirwa cheGoogle chakakosha seyakagadzirwa pamusika. Funga nezveGoogle zvakanyanya seStock Exchange. Ko kambani inopinda muWarsaw Stock Exchange iyo ichangotanga kushandira pamwe nekuvandudza iyo inonzi kutanga kumusoro. Muchokwadi, kusawirirana ndeye 1-1000000. Ehe, kwaive nemakambani ainyatso kuve akakurumbira nekuda kwekuti isu tine chigadzirwa chakakosha senge ber uye bhokisi. Ehe, iyi kambani yakawana vadyari vayo nekukurumidza uye Google yakapa imwe yemapeji ekutanga mune yekutsvaga injini nekukurumidza.
Nr.3 Marketing Content paGoogle
Kuwedzerwa kwehutano kuGoogle kunyora kunyora zvinyorwa zvakakodzera uye ruzivo rwevangangodaro mutengi kana munhu wepakati pevaya vanoshanyira webhusaiti yedu. Vanhu vazhinji vanofunga kuti kutengesa kwezvinhu zvakanyora kuri kunyora magwaro kakawanda pasi peInternet kutsvaga injini dzinotevera dzichaisa mharidzo iyi papeji yekutanga. Zvechokwadi, ichi chikonzero chisina kururama nokuti hachina chaicho chine chokuita nazvo. Saka kutengesa kunogadzirisa kuumba zvakanakisisa zviripo uye zvakagadzirirwa pane imwe nyaya.
Semuenzaniso, izvi zvinotsanangura ruzivo uye kunyatsoongorora nheyo isina kumbove yakabatanidzwa mune ipi zvayo yekutsvaga yeInternet kana imwe yewebsite. Saka kutengesa kwakagadzikana kunofanirwa kuva nhepfenyuro yakasiyana yaunonyora iwe pachako kana kambani yako yakawedzera paIndaneti uye hakuna kumbove nekushandurwa kare. Kakawanda, kugadzirwa kwezvinhu zvinoshandiswa muforbes and corporations.
Parizvino, kugadzirwa kwezvinhu zvinotungamirirwa neunyanzvi hwokugadzira. Iko inotarisa zvinyorwa zvese uye inodhura kuverenga uye kuinzwisisa pamwero wevanhu kushanda uye kunzwisisa. Uyezve, kunyange iwe ungada kuvaka webhusaiti yako iyo isina kunaka uye yakakurumbira iyo inenge isingakwanisi.
Mukutengeserana kwemaInternet mutemo wakafanana nehuwandu ndiye Mambo anowanzoshandiswa. Saka muchiPoland, zvinyorwa zvinotonga paInternet. Makambani akakurumbira ane mahofisi makuru ane zvinyorwa zvakanakisisa zvinogoneka kune avo vanogamuchira. Izvi zviri zvinyorwa zvakanaka zvakanyorwa uye zvakanaka-zvakagamuchirwa nevagashiri uye nguva dzose pane imwe nyaya iyo muenzi angangodaro yewebsite yandiri kutsvaga.
Mitauro yemagwaro mumutauro wekugadzira Maererano ne Wikipedia
Wikipedia pano inonyatsoratidzei Inofanirwa kuve kubudiswa kwezvinhu zviri paIndaneti uye chii chatinofanira kutarisa pasi pe pinecone yatakagadzira nyaya ino Ona izvo unofanira kufungisisa usati watanga kunyora zvinyorwa nemashoko paInternet.
Mabhuku ehurumende - inofanira kuva chikamu chakasimba chewebsite yepamusoro kana kushanda pasi pekodzero yekuzvimirira, eg wordpress poland. Aya maBloggi ndeechokwadi anowanzovandudzwa uye dzimwe nguva zvikamu zvemashoko zvinowanzobudiswa kunze kweInternet. Nemhaka yekuti ivo vakachembera ruzivo uye makambani makuru vateerere zvinyorwa zvavanoparidza.
Peronal blogs - Uyu ndiwo tsanangudzo yezviitiko zvakaitika muhupenyu hwako, somuenzaniso, kuenda kune dzimwe nyika kana kutarisa kana pfungwa dzako. Uye vema blogger vakawanda, semuenzaniso, vanoita mavhidhiyo mavo kuYouTube uye vanowedzera kubhu blog.
Online Zvidzidzo - zvakagadzikana zvakanyatsobatana nemiti, michesi uye mapurogiramu epaIndaneti anopiwa. Mazano anowanzogara kune vatengi paAllegro kana OlX. Saka aya ndiwo mashoko chaiwo aunogona kupa kune vako vanogamuchira, semuenzaniso nezvekubika kana kugadzirisa motokari. Vari kunyatsogadzirisa zvinhu nokuti vanounza ruzivo rwakanakisisa uye vanotsanangura zvakadzama izvo munyori anoda kuisa pfungwa pazviri.
Zviripo zvakanyorwa nevanyanzvi - zvinyorwa zvakanyorwa nevanhu vave vari mumabhizimisi kwemakore mazhinji. Izvo zviri mukati zvinongotaura nezvezvakavimbika zvoga uye ruzivo chete runotariswa uye runowanzobatanidzwa kune chakavimbika uye chakavimbiswa. Semuenzaniso, hurumende dzemasayiti ehurumende kana hurumende dzekunze. Idzi idzi dzinowanzova ruzivo rwakatotanga kurondedzera hurukuro yakapiwa. Zvisinei, vanoedza kutsanangura nyaya yacho zvakadzama uye mumatambudziko akawanda inotsanangurwa nenyanzvi mune imwe nzvimbo ine zvinyorwa zvingavimbika.
Inobvunzurudza yepaIndaneti - Kazhinji, izvi zvinokurudzirwa zvakagadzirwa paIndaneti. Zvose izvi zvinokosha kana zvasvika kune makambani anokurudzira chibereko. Kazhinji kacho, semuenzaniso, Kim Kardashian ndiye mumiriri wemagetsi kana, somuenzaniso, redbull inoshandisa nyeredzi dzemitambo kuti dzikurudzire chikamu. Nhaurirano yemuchina muhurukuro Yevanhu vanozivikanwa uye vanozivikanwa, sekukurukurirana nemutungamiriri weMicrosoft kana Apple yakabudiswa mumagazini yebazi.
Internet Podcasts - Podcasts haisi yezvakanyorwa zvekutengesa zvakanyorwa. Zvisinei, kakawanda kutsvaga injini inoteerera podcasts iyo inogadzirwa nevanhu vanoziva kwazvo pamabhizimisi, somuenzaniso, iwetubers kana munhu weTV. Zvisinei, podcast inogona kuiswa chisimbiso uye kazhinji vanhu vanotumira podcasts pawebhu vachiwedzera shanduro mumitauro yakawanda, naizvozvo izvi chikamu chekutengeswa kwakanyorwa.
Ongororo paIndaneti - inobudirira zvikuru paGoogle. Kana vakaitwa nevanovimba uye vanoedzwa. Somuenzaniso, nema blogger. Kazhinji kacho, zvinosuruvarisa, ichi hachisi chokwadi chechokwadi. Nokuti makambani mazhinji anoshandisa kuwedzera ruzivo rwenhema pamusoro pekambani. Izvi zvinosuruvarisa nguva yose iyo inowanika paIndaneti. Iwe unofanirwa kubhadhara zvakananga kana zvasvika kune simba repepa rakapiwa kana podcast yakapiwa paIndaneti. Zvechokwadi, makambani makuru seBusiness insider Polska. Dai bhandi rePoland raisazozviisa kune zvinyorwa zvisiri izvo. Saka zvakakosha kuti uone kuti ndiani akanyora kana kuti akaisayina.
Tsanangudzo yemagetsi - magwaro uye ruzivo pamusoro pemiti, semuenzaniso muzvitoro zvepaIndaneti. Muzviitiko zvakawanda, vanobatsiridza zviyero uye zvigadziro zvakanyorwa pane kadhi rechigadzirwa, izvo zvinoratidzira zvinhu zvakadai seWoCommerce Poland.
Ongororo pane Google maps - Parizvino Google yakagadzira Google Bhizimisi Bangu muPoland. Tichivonga nhumbi iyi, tinokwanisa kutarisa mabhizinesi uye mabhizimisi maduku mumusika wemunharaunda. Isu tinokwanisa kuverenga zvishoma pamusoro pavo uye izvo vanyori vashandisi veInternet search engine vanoti nezvekambani inopiwa. Chirongwa chekutsvaga chirongwa chekubudisa muPoland.
Nha. 4. Kuparidzira paInternet
Saka vanhu vazhinji vanofunga kuti kutengesa paIndaneti ndeyeAdWords chete. Zvechokwadi, ichi chinhu chisina kunaka nokuti kuparadzirwa kwepaIndaneti ndiyo pfungwa yakawanda kwazvo yekusimudzira michina.
Zvitsva zvinogona kugoverwa kuva zvikamu zviviri. Wokutanga wavo achava mushambadziri wekusununguka. Muchikamu ichi, somuenzaniso, tinofunga nezvebhuku reumwe munhu. Somuenzaniso, blogger yakaita bhafirimu paYouTube uye yakanyora nyaya pamusoro pechigadzirwa chaunacho.
Gare gare, akawedzera izvi kune webhusaiti uye akawedzera chibatanidza chako uye iwe unowana kushambadzira kusununguka kubva mumashini. Kakawanda, kushambadzira pasina rusununguko kunewo ruzivo kubva kune webhusaiti yeumwe munhu nezvekambani yako. Uye zvizhinji zvacho hazvibhadhari nekuda kwekambani iyo, somuenzaniso, inopa mabhasikoro ekutengesa. Uye kambani yako inopa zvikamu zvezvi bhizimisi izvi.
Ichawedzera ruzivo pamusoro pekambani yako apo iwe unogona kuwana idzi zvipfeko zvezvikwata zvadzo ndezveruzhinji rusununguko kubva kune webhusaiti yavo mune chinangwa chekambani yako.
Chikamu chechipiri chechirongwa chinogona kutumidzwa kubhadhara kushambadzira. Izvi ndezviziviso izvo mamwe makambani anopa mutengesi kuitira kuti vagone kukurudzira michina yevatengi vavo. Semuenzaniso, Facebook inokurudzira nzvimbo dze OLX inokupa mukana wekuedza mabhizimisi emabasa ako. Linkedin inogadzira matanho chaiwo anogona kutumirwa kune boka rakapiwa revatengi vanofarira chigadzirwa ichi. Semuenzaniso, Twitter ine zviziviso zveimwe nzvimbo, zvichida India kana America. Zvikwereti zvakabhadharwa zvakasiyana zvachose kuti vangani vachawana ruzivo pamusoro pekambani yenyu. Somuenzaniso, zvinodanwa kuti pop-up kana sub-manual. Vose avo vanogamuchira ruzivo pamusoro pekushandisa kwenyu kana kambani yenyu uye iwe unobhadhara pane imwe kambani yekusimudzira chigadzirwa chako uye kugoverana ruzivo pamusoro pekodhi yako kunonzi kuripirwa kushambadzira paIndaneti.
Saka pakupedzisa, zvakakosha here kubhadhara mari yekubhadhara? Icho chinobva pane chimwe chigadzirwa chaunotengesa uye mutengo upi unosarudza chigadzirwa ichi. Nyaya inotevera ndeyechokwadi mumakwikwi kana ichisimudzirawo chigadzirwa chimwechete pamusika uyu iwe uye kuti mukuru sei uye kune kukwikwidza. Nokuti dzimwe nguva dzinobhadharwa kushambadzira uye hazvipi zvigumisiro zvikurusa kana kukwidza zvikambani makambani makuru. Muchiitiko ichi, tinokurudzira kuti iwe uise mari mune dzimwe makambani ekutengeserana, somuenzaniso Facebook kana kutengesa email. Nokuti kana imwe ikambani inoshamba, ichiti, pamusoro pe PLN 100,000 muAdWords, uye mwedzi woga woga nzvimbo yavo inova yakakurumbira zvikuru uye chigadzirwa chako chichaenda pasi pemhando ipi zvayo. Zvinosuruvarisa, kunyange kana chigadzirwa chako chiri chepamusoro, vatengi vachiri kuda kuona zvaunopa. Uye mune mumakwikwi anobudirira zvikuru, zvinosuruvarisa, zvakanyanya kuoma.
Nr.5. E-yekutengeserana paInternet
E-yekutengeserana chirongwa chokudhinda kusvika kune mutengi. Zvisinei, mumaoko emajaya akanaka kwazvo ekutengesa, inogona kushandiswa sechiyeuchidzo chechigadzirwa chako. E-yekutengeswa ine zvakawanda zvekutengeserana zvikuru zvishandiso, somuenzaniso, kubviswa kweCart - kureva, kana mutengi achipinda webhusaiti yako uye anowedzera chimwe chinhu kumotokari. Iyi ecommerce inogona kushandiswa sehurukuro yekuregeredza remarketing yekuchengetedza kwako muIndaneti. Saka somuenzaniso, mutengi anouya ini ndinowedzera uye ndinobuda mushure mechinguva anowana email yekudzoka nemugove waakatowedzera uye zvose zvaunofanira kuita ndezvokubhadhara.
Iyi ndiyo inyanzvi yekutengeserana iyo inoshanda inenge inenge 90% pamusika wose. E-bhizimisi uye zvinhu zvakawanda zvinofadza zvinogona kushandiswa mune kambani duku. Semuenzaniso, kuwedzera pakutsvaga kwekutengesa kana kugadzira nhamba yekutenga itsva yaungashandisa gare gare. Vanhu vazhinji vanozviita zvakanaka kwazvo, nokuti, semunhu wose anoziva, zuva rine maawa 24 chete. Uye kune zvakawanda zvemabasa kuitira kuti vanhu vakawanda vanoda zviyeuchidzo nezvechigadzirwa chako kunyange iwe uchida kutenga chimwe chinhu uye mumwe munhu akamudana somuenzaniso kana achitenga chigadzirwa chako. Zvakakosha kutumira kubva kumashini mushure memazuva mashomanana mashoko pamusoro pehurukuro Sawa, iwe ungada kutenga chinhu chawakakanganwa kuwedzera kubhadhara Unokokwa zvakanaka kuti utenge mune ramangwana.
Ichowo chimiro chekutengesa kwakanaka, asi haisi iyo yekutengesa zvakananga. Saka usati wawana muteresi kubva paIndaneti ndokumuyeuchidza kuti tiripo. Kazhinji, kambani dzakawanda dzinoshandisa zviyeuchidzo zvakadaro, somuenzaniso, pracuj.pl.
Kwete..6. E-mail marketing
Iyi ichiri nzira yakanakisisa yekutengeserana kwekambani yakambogadzirwa paIndaneti. Vanhu vazhinji vanofunga kuti hapana kutengeswa hakusipo, vanhu havaverengi e-mail kubva kune zvinyorwa nezvimwe zvakadaro. Zvinosuruvarisa, tazviedza kakawanda uye isu tinogona kutaura sevatengesi vanoshanda mumisika muPoland kuti email kutengesa ichiri nhamba imwe chete. Inofadza sei ?. Vanhu vazhinji havana chaizvo nguva yekuongorora mashoko paIndaneti, tarisa TV kana kugara nevana. Uye kamwe-kamwe, ndinogamuchira ruzivo kuburikidza ne-e-mail kunondiudza kuti zvimwe zvipo zvasvika.
Nzira yekugadzira Nhau sei uchishandisa Mailchimp?
Ona paIndaneti Maitiro ekuumba zviziviso zvemakambani ne email. Purogiramu yakanakisisa, yezvokwadi, ndiyo inoshambadzira mail iyo inotumira email kutengesa zvakanaka uye vatengi vanogamuchira e-mail kubva purogiramu iyi vanowanzoenda kubhokisi rema mail kuti vasaparadzi, tinokukoka iwe kuti uone chirongwa ichi uye sarudza email yako yebhokisi. Iko kambani, yega, inopa pachena kutumira kwemailii maviri emaimiri pamwedzi.
Ivhareji yeKowalski inopinda pawebsite yekutengesa nekudhinda pachitaridzo pafoni. Uye kana yakambove iri pane webhusaiti ino yakave nekutengeswa nenzira yekutengesa email. Kubva pamichina, kambani yakatumira inoziva kuti mutengi angangodaro anofarira chigadzirwa icho kambani iyi inopa. Saka mutengi achauya kwekutanga, haazozvitengesi zvishoma, asi iye achava nehana yangu. Mushure mechinguva, achawana e-mail zvakare, somuenzaniso paanotora zvishoma pasi pe20%. Saka ndichafunga nezvazvo. Chinhu chakanakidza chikafu ndakaona kashoma kacho iye zvino ndawana kuti diskant inobhadhara kutenga ini ndinopinda, ndinotenga bhizinesi rakatorwa.
Iyi ndiyo nzira yekutengeserana kwei email. Icho chinhu chakanaka chekushandisa pakushambadzira icho chakambove chakagadzirwa nevanyanzvi veIt. Nokuti handisi kupindira mukati mehupenyu hwomunhu uye mupiki wedu anotenga chigadzirwa kubva kwatiri haafaniri kupinda muwebsite kana kuverenga ruzivo. Kubva pamashini inowana email pamusoro pekupihwa patsva kubva mune zvigadzirwa kana muchitoro chekutsvaga. Mushonga unowedzera kubhasiki chibereko chatakamutumira mune tsamba. Uye ngatitii masekondi gumi namashanu kubvira apo email ichatenga chigadzirwa chatichatumira kwauri.
Muchidimbu, emaikutengesa emaimeri akasiyana nehuwandu hwekutengesa kuti unogona kudzokera kumutengi kakawanda. Somuenzaniso, tine chigadzirwa chatinoda kutengesa gare gare, tine chimwe chinhu chakashandurwa chatinacho mune zvatinopiwa. Uye tinodzokera kumuteereri uyu kazhinji izvo zvinomubatsira chaizvo kuti anzwisise izvo kambani yedu inopa. Zvakanaka, sezvaunoziva. Kana mutengi akaona kechipiri nguva yechitatu. Ichava yakanyanya kufarira chigadzirwa ichi kudarika nguva yekutanga iyo inouya apo iwe uchiverenga pamusoro pewebsite yedu. Kazhinji iwe unogona kuzviona paIndaneti yeAdhidas kana Nike.
Kuita kudengesa kwemukati iwe unoda chaizvo kuziva kupi kuwedzera webhusaiti yako. Pasi apa iwe uchawana mawebhusayithi e30 apo iwe unogona kuwedzera bhizinesi rako pasina uye urere nzvimbo dzako mumusika wekuDaily. Zvechokwadi, dzimwe dzemasayiti aya ndezvemasangano kunze kune dzimwe nyika asi iwe unogona kutungamirira maziso eGoogle kuti wakawedzera bhizinesi rako kune mamwe mawebsite. Asi iwe uri kambani inowana vashandi muUAE uye iwe unongoda kukurudzira bhizinesi rako pane ino webhupu pasi pemutauro wekufananidzira chigadziro yekuchenesa muGulf region mu Dubai.
Kana iwe uri kutogadzira Google mapu. Iyo pfungwa yakanaka yekuisa nzvimbo yako kuGoogle kutsvaga gare gare. Zvinosuruvarisa, sezvinongoita rimwe basa mukuisa mawebsite, zvinotora nguva yakawanda.
Zvione uri pachibvumirano Chasi apa haugoni kungoisa webhusaiti yako chete asi zvakare kuwedzera mapu ako kuti uzviise iwe pachako. Somuenzaniso, pasi apa, sezvaunogona kuona, takawedzera mazamu uko kwete chete iwe unogona kuwedzera webhusaiti yako asi zvakare kuwedzera mepu newebsite yako iyo ichazoenda yakakwirira muInternet rankings.
Uyezve, sezvaunogona kuona, Google marketing inogona kuitwa nenzira dzakawanda. Zviripo kuwedzera kambani yako kumawebsite akaita seWirtualna Polska kana Onet. Kumbira mablogiki kuti vawedzere hukama kune webhusaiti yako naamai vako vanozowedzera nzvimbo kana kusvika kwebhizimisi renyu. Zvose izvi chaizvoizvo iGoogle marketing.
Nr.6 Marketing pamusoro peGoogle uye Mobile Devices
Nharembozha uye kushambadzira kwemafoni ndeyechokwadi nyaya yakaoma. Nekuti kuitira kuti ukurudzire bhizinesi rako kune mumwe munhu pane yako nharembozha, iwe unofanirwa kutarisisa pane zvakawanda zvinhu.
Tinofanira kuyeuka kuti hatigone kuwedzeredza nekutengeserana nokuti vatinoshandisa vedu 'mafoni Zvakanaka, zvinosuruvarisa, havana nzvimbo huru-huru magrini. Saka tinokwanisa kuwedzera chimwe kana zvikwata zviviri zvinenge zvichange zvichiitika uye nokuda kwechikamu A izvi zvinonzi zvinonzi pop-ups. Somuenzaniso, kambani yedu inoshandisa imwe nzvimbo yePatel. Izvi ndezvechokwadi huru huru yekushandisa yekuyeuchidza vatengi nezvebhizimisi rako.
Vanyoresa isiri chinhu chikuru chokuyeuchidza vatengi vako nezvebhizimisi rako. Iwe unogona kuvatumira ruzivo runonzi zvinonzi nhare dzefoni zvakananga kufoni yavo chero nguva. Ichokwadi, mukati memaminitsi mashomanana ini ndiri kukwanisa kusvika kune vakawanda vevashambadzi vakamboshanyira webhusaiti yenyu asi munogona kuyeuchidzwa chero nguva.
Zvose zvaunofanirwa kuita ndewe kupinda kune webhusaiti rega kutumira ini kubva kumashini inotumira mashoko kwavari pafoni yavo chero nguva yezuva. Tinonyatsokurudzira kuisa iyi shanduro pawebsite yako nokuti ichakubatsira kuti uwedzere iyi motokari pawebsite. Vateereri vako havangodzokeri pawebsite asi vanowanawo ruzivo pamusoro pezvigadzirwa zvako zvitsva zvaunoda uye unoda kugovera chimwe chinhu chitsva pamusoro pekambani yedu chero nguva iwe unokwanisa kutaura zvakananga kuburikidza nekupfuura dzimwe nzira dzekudhinda.
Nr7 SEM - Kusarudza keywords
EACTIVE Akanyora mutungamiri akanaka kwazvo pamusoro penyaya iyi. Pano zvinonyatsotsanangurwa zvose pamusoro pazvo uye kuti zvakasiyana sei ne SEO uye kuti ungashandisa sei shandura iyi.
Kune rumwe rutivi, tinoda kuwedzera zvishoma nezvemashoko pamusoro pokuti tinotsvaga sei zvinonzi mazwi makuru. Pazvinouya kune zvipo paGoogle. Tinofanira kugara tichiyeuka kuti chinonyanya kukosha ndiwo mukwikwi watinorwisana nawo. Kana isu tiri bhizimisi idzva, isu hatisi chaizvoizvo paIndaneti, tinofanira kuverenga nezvokuti makambani akange achishanda pamusika kwemakore akawanda, zvinosuruvarisa, anotipfuura.
Saka unganyatsoongorora sei kana tine mukana wekuvapo paIndaneti zvachose. Chimwe chinhu chakanaka chekuongorora misoro mikuru yatinoda kuonekwa mu web search engine ikozvino Ubersuggest iyo yakasikwa neNeil Patel. Muzvokwadi, ndiye wekutanga hacker wekutengesa internet. Akasika webhusaiti yekugadzirisa nzvimbo muAmerica kumakambani makuru. Akabatanidzawo nemakambani makuru akadai se Yahoo neGoogle. Uyewo yakanyatsogadziriswa izwi rinokosha rekutsvaga paIndaneti.
Ubersuggest naNeil Patel
Ndapota yeuka kuti usarudze chiPolish kana iwe uchitsvaga mitsara inokosha. Nzira iri nyore ndeyokunyora mutsara wemashoko ekuti iwe unofungidzira kuti vatengi vanotsvaka mamwe makambani paIndaneti. Mushure mekusarudzwa, tarisa kuti kukwikwidza kwakaoma kwemashoko akapiwa kuchave sei panguva yekuiswa kwewebsite yako. Zvechokwadi, zvakare muchirongwa ichi unogona kuona makwikwi ako nemakambani aunotarisana naye panzvimbo yakakwirira paGoogle.
KWFinder - Professional search engine yemitsara inokosha
Nechipiri chinotevera chaungashandisa ndiKWFinder. Ichowo chigadziro chinonyatsobatsira mutengesi kutarisa pamakwikwi uye kutsvaga mitsara yakanyatsokura. Pachedu, takaedza zvose zviripo. Uye zvose zviri zviviri zvinoshanda zvakanaka kana zvasvika kune zvinyorwa zvitsva. Zvisinei, kana uri kutsvaga mitsara yakafambira mberi, inonzi Long keywords. KWFinder inoratidzika kuva iri nani yekutarisa mutsara wakarurama waunoda kutanga iwe nekuisa kwako SEO rwendo.
Saka kana iwe uchida kutanga kutengesa muGoogle, unoda kuziva zvishandiso zviviri pazinga rakakwirira kwazvo,
Nr.8 SEO - Free search results
Iye zvino ndiyo nguva iyo munhu wese anoverenga nyaya ino angada kunditaurira iyi kiyi yemashiripiti iyo inomubatsira kuti asvetuke pamapeji ekutanga eGoogle. Icho ndicho chinhu chaunoda kuziva, haisi mhemberero yakareba kwazvo. Ona kunyange pane zvinyorwa zvedu izvo zvino zvakanyorwa nyaya ino iwe unogona kupona uye kupona. Ndicho chikonzero nokuti ma robots eGoogle achauya kwenyaya yedu uye anoona kuti ine nhamba chaiyo yemitsara inokosha yatinoda kumira isu pachedu. Somuenzaniso, nokuda kwechikamu ichi takashandisa mutsetse wekutengesa paGoogle. Iri haisi mutsara chaiyo wakaita kuti isu tisingatauri vatengi mumushandisi we internet. Asi vazhinji vanoda kuyeuka kuti vaverengi ndivo vashandi vedu uye tinovanyorera ivo.
Kambani yedu haina kunyora zvinyorwa pasi peGoogle. Tinogara tichiedza kunyora nyaya dzakakodzera kuverenga nekuwedzera mirayiridzo. Semuenzaniso, panguva yekuedzwa kwataiita ku Dubai. Zvakawanda zvemashoko edu zvakanganisa mukati me1,000 nguva pa Facebook. Izvi zvinyorwa, zvechokwadi, zvine zvese zvevanhu vane 3000. Vakanga vari vekutanga pepanhau re10 yeGoogle yepasipiwedi yakaoma zvikuru uko kutsvaga kwaive kwakapoteredza 3,000 maonero pavhiki.
"Nheyo dzekutengeserana kwekambani ndezvekuti:"
B) Nyaya yeAnited Command Next
Zvinogara zvakakodzera kutarisa pane zvaunoita paIndaneti kubva maonero ewebhu web browser. Zvakanaka, kana iwe usingadi kubhadhara pakushambadzira uye haufaniri kushandisa mari mairi kuti utenge vatengi vatsva pawebsite yako. Iwe unofanirwa kuva nechimwe chinhu chaicho chakasiyana pawebsite. Saka chinyorwa chakareba, chakatendeseka, chakakwana chinofanira kuita mano. Vazhinji vatengesi vanonyora ruzivo paInternet havapi zvinyorwa zviduku kupfuura zvinyorwa zve2000. Kunyora nyaya iri pamusoro pevarimi vechi4,000 Zvakanaka, zvinosuruvarisa, ndezvemaawa 10 emabasa anovimbika. Kutengeswa kweGoogle hakusi kunakidza, nhamo. Iri ibasa rakaoma uye rakavimbika pabasa rako.
Nr.9. Zvemagariro evanhu facebook uye LinkedIn
Saka nhepfenyuro yehupfumi ndiyo nyaya yedu yekudhinda yakanakisisa. Zvinosuruvarisa, huwandu hwemagariro evanhu hahune hutsva hunotsvaga injini. Iyo chete iyo inonzi iyo inonzi nhepfenyuro yevanhu inowanikwa chaizvo pawebsite ndeyokusimudzira mawebhusayithi kune vamwe vashandisi.
Panguva ino yemazuva ano, nzvimbo dzakawanda dzekushandura mitambo dzakadai se Instagram dzakadzima kutumirwa kwe data kutsvaga injini. Hatizivi chaicho chikonzero chakaitika. Chero kambani iyo ichiri kutumira mashoko pamusoro pezvinonzi chiyero chekugoverana kwewebsite yako ndeye Facebook.
Zvisinei, pane chimwe chinhu chinonyatsoita chinokanganisa mazinga muzvinjini dzinotsvaga. Izvi ndizvo zvinonzi kushingaira, ndiko kuti, kuongororwa kwePoland ndeyekuti vanhu vazhinji vangapinda sei uye vanoita pawebsite yenyu uye vachawedzera kukurudzira webhusaiti yenyu.
Saka chii chaicho chinokupa huwandu hwemagariro ekutengesa paGoogle? Zvechokwadi, vanokuunzira vamwe vakawanda vatengi uye mibvunzo yakawanda. Zvechokwadi, izvi zvinosanganisira kuwedzera bhadha yekutsvaga, somuenzaniso, nokuda kwekutengesa kubhadhara. Kana nhepfenyuro yevhidhiyo nemashambadziro ekugadzirwa zvakanaka zvakagadzirwa nemunhu ane pfungwa yekuzviita, unogona kubudirira kubudirira. Vanhu vazhinji vakaratidza kuti pa Instagram pachavo ivo vakadzidza kuwana mamiriyoni evateveri. Uye pa Facebook, akakwanisa kuwana mamiriyoni emadhora madhora mumwedzi. Zvinoratidzika zvisingaitike zvakadaro zvakadaro. Kana uine webhusaiti yakanaka uye iwe unoziva kugadzira zviziviso, unogona kuita rekodhi chaiyo yemari.
Kambani yedu inopayona uye inenge yakakura kupfuura yose paIndaneti uye pahusununguko pazvinouya mukusimudzira Dubai. Iwe unogona kuicherechedza nekudhinda pamufananidzo uri pasi apa.
Kwete.10 Kutengesa kuGoogle uye Youtube?
Unoziva here iyo injini huru yekutsvaga? zvechokwadi iyi iGoogle. Uye inotevera inotsvaga yeInternet injini mushure mekunge iYouTube. Saka ikozvino 1000 vanhu vanowedzera kambani ine mufananidzo uye firimu. Sei, nokuti vanhu havana nguva yekugara uye verenga imwe nyaya inonzi 10,000 characters. Uye vasati vauya kuzana remakore, vanopedza maminitsi e20 vachiverenga nyaya yacho. Vanhu vanowanzova mapenzi zvakare.
Saka ungawana sei mapeji ekutanga eGoogle. Nyora mazana emavhidhiyo mumwedzi. Zvechokwadi, zvicharatidzika zvakaoma kunyora firimu uyewo kugadzira nzvimbo yakanaka nekudaro. Parizvino, unogona kutenga maitiro akasiyana-siyana paAllegro iyo inodhura mari ye PLN 200. Uye pane chaizvoizvo hapana misiyano muhutano inenge yakangofanana nekodhidhiyo yekurekodha pane redhiyo yehupfumi.
Iwe unofanirwawo kufunga nezvekusimudzira chigadzirwa chako nekambani yako paYouTube. Sangano redu rakabudirira kukurudzira makambani anobva ku Dubai. Takawana kubudirira kunoshamisa, mazana emakumi ezviuru evanhu vakatarisa nekambani yedu uye vaiida uye polajował zvakare. Uye yeuka, kila pawn up ingangodaro mutengi uyo achashanyira website yako.
Kuti ushandise zvizere Google kutengesa, unofanira kudzidza kuti ungashandisa sei maikirwo emakambani ekuIndaneti. Pakati pezvimwe zvinhu, kuumba mavhidhiyo emakwenzi Iva nebhajamiro yakashata uye yechokwadi inoratidzire zvakakodzera nyika yako. Zvichienderana nezvese basa raunotengesa, rinogonawo kuva nzvimbo yePoland. Zvechokwadi, havasi vose vanogona kutengesa mabasa avo pa YouTube. Asi vhidhiyo yekubvumira zvechokwadi inodhura pasi pe PLN 50 yaunogona kuita paFiverr.com, somuenzaniso.
Nr.11. Kugadzirwa kwemawebsite
Zvakanaka, waita kutengesa kwawakabatanidza Google Analytics, une zvinhu zvose. Nezvekutengesa uye iwe wakabudisa kutanga kwako kubudisa purogiramu. Ino ndiyo nguva yekuwedzera webhusaiti mu html code. Chaizvoizvo, kuti uite izvi unoda purogiramu. Hatinokukurudzire kuti uvige muwebhuku rewebhu rekuti iwe hauna zivo pamusoro pechirongwa chekugadzira. Nokuti kana iwe pano kamwe kamwe iwe ukakanganisa, peji rose rinogona kubviswa uye zvose zvawakaita kusvikira ikozvino pa wordpress kana pane imwe nzvimbo zvichazobviswa zvachose.
Tinoziva kubva pane zvatinoona kuti kunyange kuchinja kuduku kunogona kukuvadza iwe nekambani yako. Nokuti kana iwe usingazivi kuti iwe uri kunyatsoita chii, unogona kuita chikanganiso chinoshamisa chichakudhura peji. Somunhu oga, kazhinji kacho pakutanga, kambani yedu yakaisa iyo portal kubvira pakutanga. Nemhaka yekuti isu takanga tisina kuziva, taita zvisiri izvo uye takafanirwa kusika zvinhu zvose kubvira pakutanga uye zvakatipa mari yakawandisa uye kutarisa.
Uye rangarira, hapana chinhu chakanyanya kuipa kune anokwanisa kutengesa. Kufanana nezvikanganiso pawebsite. Vatengesi vanenge 95% vanobva pawebsite kana vachiona zvikanganiso nokuti vanonzwa vasina kuchengeteka uye havanyatsogutsikana kuti kambani yenyu yakavimbika. Yeuka kuti kushambadzira paGoogle zvakare kunobva pane zvaunofunga.
Summary of iyi chikamu
Mukupedzisa, munyaya ino wakadzidza zvinhu zvishomanana zvinokosha zvinokubatsira kuti unzwisise kuti kuve nzvimbo yeiwebsite. Kana iwe uchida kunyatsodzidza zivo yako zvakakwana uye unonzwisisa kuti Indaneti inoshanda sei. Iwe unofanirwa kuenda kune Google online revolutions pasi apa. Tarisa uye upedze zvimwe zviedzo zvichange zvakakubatsira iwe munguva yako yemberi.
Kana tikakwanisa kuwedzera chimwe chinhu chaunosangana nacho munyaya ino kubva ku kambani yedu. Zvinonyatsokutaurira kuti basa romutengesi uye nzvimbo dzekuisa nzvimbo haisi basa rakanaka. Zvechokwadi, pano kunouya kuneta uye kushanda chaizvo kupfuura simba rako. Kunyoresa kwekutsvaga kweterevhizheni kana chekuchengetedza iwe waunoda kuita iwe kazhinji kacho kunofadza chaizvo.
Asi usamborega kupera nguva dzose kurwisana, hapana nzira yausingagoni kubudirira. Takarwira kwemakore akawanda nekambani yedu muDhailand uye zvakaitika pashure pegore rechitatu zvatakwanisa kuwana dzimwe nzvimbo dzakatendeseka dzakatitorera mari kubva kuGoogle. Saka zviduku ndezvekutarisira kwemakore anenge matatu. Yeuka kuti pavhareji, makambani anozviisa pachedu kubva ku5 kusvika ku7 makore uye ichi ndicho chiyero pane izvo unofanira kufungisisa. Zvakanaka, zvinosuruvarisa, kutarisa inzira inogara kwenguva refu inotora nguva yakawanda. Uye inotora mari yakawanda.
PS ino chinyorwa ine 5,000 vanhu. Saka sezvaunenge wakatofungidzira, iwe wakatiwana isu muIndaneti kutsvaga injini. Wakamboverenga nyaya yedu yose uye unofara nezvatakanyora here? Isu takangotaratidza kwauri kuti urefu uye hutano hwechikamu chacho zvakakosha munjini dzekutsvaga. Nyaya yakanyora uye yakanyora yakanyorwa zvakanyanya, kukurumidza kwako zviripo zvakagadzirirwa paGoogle. Kwazisa uye kutarisira mberi mazwi ako kana foni kubva kwauri. Tichakubatsirai mukudengisa uye kuisa nzvimbo yako webhusaiti muPoland kana kune imwe nyika.
Zvimwe zvikonzero nei iwe uchifanira kutarisira web site yako SEO
Nhasi, inenge 95% yemakambani ine webhusaiti yavo. Asi chaizvoizvo iyi mawebsite akatsigirwa zvakanaka uye akakurumbira paGoogle kukunda vatengi. Kutaura zvazviri, kugadzira webhusaiti hazvizokuunzira chero vatengi, kana zvinotarisirwa. Mazuva ano kunyange webusaiti yakagadzirwa zvakanaka haiti mari.
Saka, kuisa webhusaiti hazvisi chinhu asi kukurudzira bhizinesi rako rekuInternet.
Kana iwe uchida kushanda bhizinesi rinobudirira uye rakabudirira zvikuru paIndaneti, unofanira kutenga mutengi chaizvoizvo kubva chete kwemashoko ehupenyu. Tinoziva kubva pane zvakaitika kuti pamusoro pe85% yezviziviso pazvinonzi Google AdWords haisi yepamusoro kana iwe une bhizinesi duku. Zviziviso zvinowanikwa paGoogle zvinoshandiswa chaizvo nemakambani makuru uye avo vakambomira zvakanyanya kunyanya kutsvaga injini.
Poland ndiyo muenzaniso wakanaka kwazvo wekusimudzira mabhizimusi paIndaneti. Nhamba yevatengi vatsva kubva kuGoogle yakawedzera nekusvika 55% mumakore mashanu apfuura. Zvechokwadi, kubva pa2015, kufamba kweInternet uye mabhizimisi epaIndaneti zviri kukura zvikuru kwazvo. Pari zvino, vatengi paIndaneti vari kutsvaga zveruzivo rwavanoda nezvechigadzirwa. Mapolisi ari kuramba achitenga kutenga paIndaneti, somuenzaniso, paAllegro kana pane OLX.
Zvitsva zveGoogle mabhugi zviri kuwedzera kakawanda. Zvizhinji zvinonzi avo vanogadzira mablogi vanowedzera ruzivo uye tsanangudzo pamusoro pekufamba kana zvipfeko. Uyewo pfungwa yemusika pane internet uye inowedzera gore negore zvikuru mumaguta makuru akadai saWarsaw kana Krakow uye kunyange Legionowo.
Chii chinonzi SEO uye Kushambadzira?
Nzvimbo yepaIndaneti inowedzera kuwedzera kuonekwa kwewebsite yako pakutsvaga injini. Kubva kuChirungu ndiko kutsvaga injini yekugadzirisa kana SEO. Mazuva ano, kambani imwe neimwe ine SEO yayo uye dhipatimendi rokudhinda. Kazhinji makambani anovaka mararamiro avo paInternet anowedzera kuonekwa kwewebsite yavo, kuvaka mazita avo, kuwedzera simba rechirongwa uye, hongu, edza kuita nzvimbo dzekugara muWarsaw sezvinogona kubudirira.
Paunongotanga kumira webhusaiti yako, wedzera kuoneka kwekambani yako uye kukwezva vatengi vazhinji vanoshandisa masevhisi ako kana kutenga zvigadzirwa zvako muchitoro chako chepa online. Iwe haufanirwe kunge uri muzivi kuti uone kuti vatengi vari kuwedzera kutenga online uye kutarisa ruzivo nezvekambani.
Ichokwadi, vanhu vazhinji vanoshandisa internet havakwanise kutarisa mawebsite neyekuchengetedza apo vanogovera chinhu chakafanana zvikuru kune bhizinesi renyu.
Pamusoro pe85% yevanhu vanopinda panzvimbo yepamusoro ye5 paGoogle. Ikoko kune nyika yakajeka yekutengesa kuti kana iwe uchida kuviga chitunha, ita izvi kune rumwe rutivi rweGoogle.
Zvikonzero zvishoma nei uchifanira kumira yakakwirira muGoogle website yako?
Kuwedzera mune purofiti
Vashoma kupesana nevatengi
Wedzera kusvika kwebhizimisi rako
Muteveri achidzoka kubva kuInjini yekutsvaga injini
Zvingaita kuti zviyeuchidze mutengi kuburikidza ne-email marketing
Kugadzirisa zvinyorwa zvevashandi mukambani
Panguva ino yemazuva ano, maitiro ekucherechedza muchitoro nekutsvaga paIndaneti yakawedzera. Kunyanya vechidiki, kunyange munun'una wangu muduku, munguva pfupi yapfuura vakaenda kumhuri yemhando yeTVV store. Akatarisa pane zvigadzirwa zvakatarisa kuongororwa paIndaneti ndokubva adzokera kumba akatenga chigadzirwa ichi paIndaneti. Nzira yakachenjera nokuti vazhinji makambani anoratidza michina muchitoro zvishoma kudhura nokuti inofanirwa kushandisa mahara. PaIndaneti Zvechokwadi, vanogona kuita zviduku zvishoma kubva ipapo.
Nzira yekutanga sei kuisa webhusaiti zvakanaka?
Saka kutanga kutarisa webhusaiti yako zvakanaka, unofanira kutanga kubva pakutanga. Ona kuti nzvimbo iyi yakaita sei uye chii chinokurumidza chiri peji ino uye kana pasina munhu akaputsa nzvimbo uye akaita zvinonzi spam links.
Iwe unodawo kutarisa mararamiro mune injini yekutsvaga kana kero yakarurama uye ingave kambani yaunoda kumira uye yekambani yako ine maitiro akanaka. Iko kune zvikonzero zvakawanda chaizvo zvinoita kuti nzvimbo yako iwedzere mumigumisiro kana pasi.
Mune dzimwe nguva, nguva dzemazuva ano dzinoda zvachose kusingakwanisi kugadziriswa. Parizvino, yese SEO inotsigira kuchinja kweGoogle magadziridzo. Zvechokwadi, zvirongwa izvo sangano iri rinoshandisa ndeye 100% zvakavanzika. Saka, vanyori vatatu mukuisa mawebsite havazivi nezvebasa ravari kuita?
Kwete vanyori vese vanoshanda nevatengi vanonyatsonzwisisika nzvimbo yekugadzirisa nzvimbo iyo inowanzowanika pawebsite dzeGoogle, semuenzaniso maGoogle makadhi ebhizinesi kana Google maps.
Nyanzvi imwe neimwe inoparadzanisa kuiswa kwewebsite yekuti mune izvo zvinonzi zvikonzero zviviri.
Nzvimbo yepaIndaneti inoisa uye inovandudza nzvimbo yacho mukati. Kuvandudza kadhi yepamusoro uye kuongorora peji yepamusoro.
Uye kuisa mapeji ekunze, kureva, kuwedzera mukati mehutano nekusimudzira michina pane mamwe mawebsite.
Sei tichifanira kusarudza kambani yedu?
Kambani yedu yekutengesa inobva kuA Dubai neLondon. Takabudirira kuedza nekuisa mawebsite kune dzimwe nyika. Parizvino, kambani yedu inobatsira vatengesi kubva kuPoland kuti vaise mawebsite emaharare, semuenzaniso muWarsaw, Krakow uye mumataundi maduku akadai saRadzimin.
SEO - kufona ME nhasi uye kuronga rusununguko Marketing quote!
Website yakagadzirirwa uye kuiswa muBud Dhabi
-Nhoroondo ine ruzivo pamusoro pekusimudzira bhizinesi rako rekuInternet!
Kana uri kutsvaga kambani inobatsira iwe kuisa webhusaiti yako muEmirates. Tinokukoka noushamwari kuti ushande pamwe nesangano redu. Tine makore akawanda ane ruzivo mukuisa mawebsite paGoogle.
Munguva dzino, chinzvimbo chemawebhusaiti ndechekuti, zvinosuruvarisa, ibasa rakaoma uye zvinoda kushandira pamwe nevanhu vanoziva zana muzana chii chaizvo chinofanirwa kuitwa kuti ive nechokwadi chekuti saiti ine chinzvimbo chepamusoro mumjini yekutsvaga.
NezveInternet business in Abu Dhabi?
Abu Dhabi ihwo chaizvo guta rakananga kana zvasvika kune online bhizinesi. Abu Dhabi kazhinji inongedzo kumabvazuva UAE. Pedyo neguta guru reDubai Voivodehip iri iyo Central Center yebhizimusi reGulf kurangana muEmirates.
109 th ruzhinji rweguta mune UAE uye yechipiri muAFA, vanopfuura 340,000 vagari mu2018 vakanyoreswa muhofisi. Zvakare, kutarisa nhamba dzekunyoresa pachayo, zvakakodzera kuisa mari mubhizinesi paInternet mu Abu Dhabi.
Vanhu vakawanda munguva ino vari kutsvaga mawebsite akawanda uye zvigadzirwa paIndaneti. Uyewo kana uri kutsvaga nzvimbo yako kuti iiswe panzvimbo yekutanga yewebsite, unofanira kuzviziva nehupi hwepaiti yedu.
Abu Dhabi nderimwe remaguta atinofarira uye kubva ipapo tine vashoma vatengi vanogadza mawebhusaiti muUAE.
Abu Dhabi anozivikanwa nekuve guta revadzidzi, saka SEO mawebhu mu Abu Dhabi anoda kurangarirwa. Bhizinesi inotanga mukati megore redzidzo uye ino ndiyo nguva inopisa kwazvo uko chaiko guta rakazadzwa nevadzidzi nehupenyu mumaresitorendi.
Mamwe ose emwedzi muBud Dhabi pane mwedzi yemazhizha uye iwe unogona kutaura noushingi kana iwe unogona kuwana zvakanaka chaizvo mumwaka mune zvebhizimisi. Pamusoro peizvi pamwe nebhizimisi muBud Dhabi ndeyekuti inenge yakaenzana nehuwandu hwemari.
Abu Dhabi iri guta guru mumashamba uye mashoma masimba. Uye pane kudaro, zvikwereti zvakakura pano hazvipindi kunyange kana zvasvika kune bhizinesi rebhizimusi. Uyewo kuisa uye kutengesa kuGoogle kuno nguva dzose inogoneka kuita.
Apo zvinosvika pakurongwa kwewebsite panzvimbo yemisika yemunharaunda. Zvinosuruvarisa, mutengi wekunakidzwa system uye muridzi wekambani aripo pano. Pasi apa uchawana makambani mashomanana atinoshanda navo muEmirates uye tinoisa mawebsite avo.
Sezvo wokutanga muBud Dhabi kukuratidza kuti tatove tichishanda pamusika wekumusha, tichazotora zvipfigiso ne kebab bhisiki sandwiches uye nzvimbo dzekudyara dzevadzidzi.
Isu tanga tichiita SEO uye Ekushambadzira mawebhusaiti kwemakore mazhinji ikozvino uye vazhinji vevatengi vedu vanogutiswa.
SEO muBud Dhabi - Danai nhasi uye rongai hurukuro yepachena!
webhusaiti yepamusoro yepachigaro
Ichange ichitungamirwa pachako naJohn West
SEO yemaguta madiki muUAE uye Mapeji emuno. Isu tinogara Tichigamuchira vatinoshanda navo kubva kudiki mawebhusayithi. Yedu yemakambani chinzvimbo mapeji Emirates. Isu tine anobatsira mazana emakambani madiki anoshanda muGulf Region.
Zviduku chikamu cheEmirates maguta ndewa manenji akakurumbira, iwe unoziva chii chaizvo rakanyatsogara guta muEmirates muGulf Region.
Voivodship munharaunda yeDhailand, uko pane makambani mazhinji akadirika aunogona kutanga kubatana. Uye vatengi uko iwe unogona kupa zvipatara zvako kana mabasa.
Madhorobha madiki ari padyo neDubai ne Abu Dhabi ari kungova 25 km kure kubva pakati peDubai. Uyezve zvirokwazvo mutengi akapfuma uyo maunogona kutengesa zvigadzirwa zvako.
Munguva idzodzo munhu wese ane internet muDubai. Iwe ungangodaro wakashamisika kakawanda maitiro ekuita kuti usvike pakuziva guta rese muzuva rimwe. Zvakanaka, mhinduro iri nyore kushambadzira internet. Kambani yedu inokwanisa kukubatsira kumira uye kusimudzira bhizinesi rako mumataundi madiki eEmirates.
Isu tiri kugadzirisa webhusaiti yako muDubai madhorobha!
Isu takasimudzira nekuisa mazana emakambani muLondon, London, Brussel. MuEmirates, kune vanopfuura 15,000 vagari, guta rine pamusoro pe 24,000 square kilometres. Zvakare, iyo mikana yekutengesa yako chigadzirwa uye chinzvimbo bhizinesi rako online rakanaka kwazvo.
Zvakakodzera here kuisa webhusaiti mukati Emirates?
Saka muvhareji wemakore munzvimbo ino unogona kusvika paIndaneti iri pakati pe20 nemakore 65. Saka nenzira yekutaura, vanhu vakawanda vari kushanda kana kuti vakagadzirisa mari. Izvi zvinonyanya kukosha kana zvichisvika pakusimudzirwa kwezvinhu zvako pamutambo. Nokuti zvakanakisisa kutengesa zvigadzirwa paInternet kuvanhu vane mari chaiyo uye vanogona kuidhura panguva ipi zvayo.
Vanhu vari muzera iri muEmirates zvirokwazvo vanoshandisawo zvekugarisana nevamwe vevanhu sezvakaita Facebook. Isu tinokwanisa kukubatsira kuti uwane zvinopfuura vatengi ve10,000 mune rimwe zuva.
Saka kana iwe uchizoda kusimudzira bhizinesi rako mukati Iyo UAE kana kunyangwe kuGulf. Kambani yedu inopa nyanzvi kumira kwemawebhusaiti muDubai nenzvimbo dzakatenderedza. Kumisikidzwa kweDubai uye Abu Dhabi Mapeji kunogoneka kwatiri muGoogle !.
Sangano redu rakabudirira kubatirana uye rinoramba richibatsirana nemakambani epasi rose uye nyanzvi yekambani mukudhinda. Uye makambani anoshanda kuMiddle East. Pakati pezvimwe zvinhu, takabatsira mabhizimisi eIndaneti uye kambani inoda kusvika kune vashandi nokukurumidza. Zvechokwadi, kuisa mawebsite kunoda nguva shomanana kudarika mwedzi ye6 kusvika kune gore.
Zvishambadziro zvinotengeserana zvevakadzi vemuno, vatengi vako avo mushure mebasa vanotsvaga zvigadzirwa pa internet. Isu tichakupa iwe zvese mushambadziro yekushambadzira umo isu tichagadzirira kunyanya iwe. Mumiriri wekambani yedu achauya kuhofisi yako kana kumba kuzotaura nezve izvo iwe zvauchatanga kukurudzira online. Kambani yedu inobatsira zvechokwadi. Tinoda kubatsira vatengi vedu. Yedu HR timu haisi kutsvaga vanhu yekuvanyepera.
Tinoda kubatsira vatengi vedu in Emirates
Dubai City Kambani inoda kukubatsira kuti uite kuvepo kwako pamusika wemuno. Uye zvakare, isu tine maturusi ekuzviita, isu tinoziva nzira yekukubatsira iwe kuti uwane imwe mari uye kuvaka bhizinesi pamusika wemuno pedyo neDubai. Ehe, kana iwe uchida, isu tinokuzivisa iwe kune chirongwa chekudyidzana uye chinzvimbo chewebhusayithi pamusika weAEE. Kubva kuDubai, ingori 25 km kusvika pakati peguta. Saka kana iwe uine chigadzirwa chakanaka kana sevhisi zvinokutorera iwe 20 maminetsi kuti usvike pakati peguta. Saka isu tinokwanisa kukubatsira iwe kuvaka bhizinesi munharaunda uye famba uchienda kune yese yeGuwa dunhu mune chako chigadzirwa chinoshamisa kana sevhisi.
Tinotarisira kuti iwe uchatipa mukana uye rega tiise nzvimbo yako webhusaiti muUAE. Kana iwe uchida Iwe unogonawo kuverenga zvishoma zvishoma nezve geolocation neInternet marketing, somuenzaniso pa Instagram.
Mushure mokuverenga zvishomanana zvemashoko edu muchaona kuti tine chokwadi chaicho pamusoro pezvatinoita mukutsvaga kwekutengesa uye kutengesa email. Zvechokwadi, kuisa mawebhusayithi ndeyo basa redu guru. Asi tichaita zvatinokwanisa kuita boka rekambani pamakadhi ebhizinesi reGoogle uye kuwedzera webhusaiti yako kuitira kuti vatengi vemunharaunda vatsvake kambani yako uye vakuwane iwe kutanga.
Sumarizing yeSeO mu Dubai
Saka, Positioning muUAE - Zvinogoneka uye pane mukana wakaisvonaka wekuti iwe uchava muTop 10 Google kana iwe ukatipa mukana gare gare gore rino. Mukukwikwidza mu Dubai ne Abu Dhabi iri kukura nguva yose. Zvinosuruvarisa, kutengeserana kwepaInternet kunoshanda kuitira kuti kana gore rino mumwe munhu adzoke panzvimbo yekutanga yepamusoro ye3 mujini yekutsvaga uye vatengi vanotanga kuwedzera mhinduro yakanaka.
Zvakanyanya kuoma zvikuru kuwana nzvimbo iyi zvakare kambani itsva. Uyewo, iwe unofanirwa kufungidzira nezvekushanda nekambani iyo nzvimbo uye unokurudzira mishonga yeInternet.
Saka isu tinovimba kuti muchatibata, tinotarisira kufona. Ndokuona uri muguta rakanaka kwazvo reRadzymin, Ndinokushuvira rombo rakanaka uye nekuenderera mberi mukuvaka bhizinesi padhuze neDubai.
Nzira yekuita sei vateveri pane instagram?
Nzira yekuita sei vateveri pane instagram? - Ita kana usina pano mubvunzo!. Munguva yedu, kushamwaridzana kwevanhu ndeimwe yenzira dzakakurumbira dzekubatana pakati pevechidiki. Instagram ndechimwe chevashandi vanobatanidzwa pachikwata pazvinouya pakuratidza kushambadzira paInternet.
Instagram haisi yomufaro unozokubatsira pakuisa webhusaiti kana mune SEO. Asi kunyatsokunda vateveri vakawanda kuchawedzera kukudzwa kwako kwekodzero uye kuvandudza iyo inonzi inonzi Brand Brand kuziva.
Nzira yekuwana sei vateveri pa instagram - Marketing Marketing kubva ku Dubai City Company
Instagram ndeyechizvarwa Y, kana kuvanhu vakaberekerwa muZ80 dzezana ramakumi maviri. Isu tava chizvarwa cheMillennium, izvo zvinonzi chizvarwa che digital. Nokudaro kusvika kune rudzi urwu rwevateereri kunoda zvidikaniso zvemazuva ano ekudhinda.
Ndinokutendai nekusimudzirwa kwemugadziri wako uye kushanda pane Instagrama channel, tinogona kusvika kune vakawanda vanogona kutenga vatengi uye makandarani. Ichi chikwata chekutengesa, pasinei nekuonekwa, hachisi chechecheche vasikana vanosimudzira maitiro avo. Zvisinei, pane dzimwe nguva zvakakodzera kupinda nekuona kuti uzvienzanise.
Zvigadzirwa zveGentlemen uye nhengo dzechitatu-mapato!
Saka kupi kutanga kutora Instagram yako kuwana vashandi vatsva. Nzira iyo iri nyore ndeyokutanga nekugadzira kambani pane iyi yeruzhinji.
Nzira yekuita vateveri pa instagram - Kutanga pa Instagram - Dubai City Company
Kuda kuziva kwakadaro tisati tava kudzidza Kudzidzira vateveri pa Instagram. Ichi chikwata chave chave chave chaive neChristo kwemakore anoverengeka. Saka kana iwe uchipa zviziviso pa Facebook kubva mumashini, unogona kutarisa kuti ivo vanoonekwawo pa Instagram. Tinoziva kubva pane zvakaitika kuti zvine musoro uye vazhinji vanopinda kubva kuIstagrama panguva yekuparidzira. Izvi zvakanaka chaizvo kuwedzera kune zvikwata pa Facebook. Nenzira iyi isu tinogona kusvika kune vakawanda vatengi.
Chii chiri Instagram?
Saka iyo inonyanyozivikanwa yehutano hwevanhu panzvimbo ikozvino mamiriyoni evashandisi vanobva kuAmerica neAsia vanoparidzira mifananidzo yavo nemavhidhiyo pamusoro pemisoro yakasiyana chaizvo.
Instagram yakasikwa mu2010 uye yakatanga basa rake se apple app. Instagram nokukurumidza yakakura paIndaneti. Kubva pane zvinyorwa zviduku zvinenge zvichiitika mumakore e2 uye yakaita sangano rekubudisira vanhu panzvimbo yakaenzana nekambani ye digital.
Kwemakore mashoma kwe3, shanduro iyi yakaedzwa munyika dzakawanda kunyanya muCentral America pakutanga. Instagram yakatorwa ne Facebook nokuda kwebhadharo yemari inenge inenge mabhiriyoni emadhora.
Chinhu chikuru chinoita kuti chikwata ichi chive chakakurumbira chakanga chakanyatsogadzirwa. Zvechokwadi, kambani iyi yakanga isiri yekutanga kwaiva nemamwe makambani mazhinji akatova panguva iyoyo akapa sangano rakafanana. Zvisinei, Instagram yakakurumidza kuwedzerwa kwemafoto ayo uye kukwanisa kutamisa chinyorwa pasi nekukurumidza zvakanyanya kupfuura kukwikwidza. Uye zvakanyatsogadzirisa nei chikwata ichi chave chimwe chezvinhu zvakakura zvikuru zvekubudiswa kwepa Facebook.
Instagram zvakare nyore nyore kubatanidza mikana yekuwedzera mifananidzo kubva papefoni kuenda kune imwe shanduro. Mushure menge mwedzi mitanhatu kubva pakutanga kwekushanda, kambani yakange iine vanopfuura mamiriyoni mashoma vashandisi vakanyoreswa. Instagram yakapindura zvakakurumidza uye yakawedzera kune zvayo. Kukwanisa kukurumidza kufananidzo mifananidzo.
Zvakakosha kutanga kutengesa kubva ku Instagram mu Dubai?
Instagram inonyanya kushambadzira. Inonyanya kutarisana neboka revanhu rinosangana nemafashoni, kufamba uye mabasa akasiyana-siyana evakadzi. Sezvo kune vanhu vane hanya, pane, hongu, zviitiko zvisingashamisi zvekambani dzinokurudzira mabasa avo kuvashandi vari muchikwata chevarume. Asi izvi zvinenge zvisingawanzoviki-kupa zvipo.
Nzira yekuita sei vateveri pane instagram - 100% Marketing Automation! - Dubai City Company
Instagram zvakajeka kwazvo inotitaurira kuti chiyero chevashandisi 'kubatanidzwa pachikwata ichi chakakura kudarika kune dzimwe nzvimbo dzekugarisana nevamwe, somuenzaniso twitter. Kunyanya nokuti vakadzi vanogara pa Instagram vanongotarisa zvipfeko zvakawanda vasati vasarudza.
Sei zvakakosha kutanga pamusasa we Instagram? Tichifunga kuti kubatanidzwa kwevashandisi veEcagrama kune yakakwirira kudarika Facebook kana Twitter. Uye iyo Instagram in 2018 yakanga iine vashandi vanoshandisa mabhiriyoni e3 vanoshandisa zvakatiudza kuti munhu wese wechitatu pasi pano anogara achishandisa sendi ino.
Saka sei kutanga kutora vateveri?
1. Zadza profile yako yekambani pa Instagram
Pakutanga Iwe unofanira kufungisisa chinangwa chaiyo chekuvhura Instagram account. Nokuti pamusangano uyu unogona kusarudza pakati pekambani yega yega kana kambani yekambani. Saka kana ukasarudza kambani yekambani, zvinosuruvarisa kuti iwe unofanira kuzvibatanidza neaka Facebook account yako. Izvi zvine zvigaro zvayo sezvo zvichakubvumira kuti uzadze nheyo yako yepamusoro yega uye kukubvumira kusarudza mhizha iyo iwe uchazivisa.
Iko Instagram profile iyo inopa huwandu hwekuwana kwehuwandu uye inokubvumira kuti iwe ugadzire zviziviso zvinotsigirwa. Saka pakutanga unofanira kusarudza chinyorwa chinoparadzanisa kana pikicha yepikicha kuitira kuti vamwe vashandisi vatsva pahuwandu hweporofita. Chero mamiriro ezvinhu, mufananidzo unofanirwa kushamwaridzana nekambani yako kana bhizinesi rako.
Chinhu chinotevera chiri kuwedzera chimwe chinhu chakanaka kune bhizimisi rako rega rega rekutsvaga kana tsanangudzo yekambani yako. Edza kusambokopa mavara kubva kune mamwe mawebsite kana mamwe mawebsite. Nokuti ikozvino injini dzekutsvaga dze internet dzinonzi zvinonzi spam filters. Izvi zvinotsvaga kutsvaga zvinyorwa zvinyorwa kubva kune dzimwe nzvimbo uye zvishoma nezvishoma kuderedza kutsvaga kwepaji rako pane Instagram.
Zvinonyanya kukosha kuti webhusaiti yako yakanyorwa mumabhii makuru. Uye zita rekambani yako rakatarisa zvisingaenzaniswi. Zvakanaka, kunze kwekuti iwe uchida kukurudzira maraka yako iwe unokwanisa kuigadzirisa nenzira yakadai yokuti vanhu vakakutsvaga pa Instagram vanotsanangura zita rekambani yako kana marashi yako. Yeuka kuti chinhu chinonyanya kukosha mukusimudzira pamagariro evanhu ndeyekuti kambani yako kana zita rako rive rakanaka uye rinorangarirwa nyore.
Chimwe chinhu chinokosha zvikuru. Instagram yakawedzera mukana wokuwedzera izvo zvinonzi hashtags. Iko ndiko, iyo inonzi "picket keywords" inogona kunge inoshandiswa nevashandisi veku Instagram nekuwedzera mashoko pamusoro penyaya iyi kumaprofayiri avo. Somuenzaniso, kambani yedu inoshandisa: #DubaiCityCompany
Nzira yekuita sei vateveri pane instagram - Marketing Automation! - Dubai City Company
2. Tanga kusimbisa purogiramu yako
Pakutanga, tinokurudzira kuti uve nechokwadi chokuti vanhu vakatova ku Instagram vanodzidza kuti wakavhura account iyo uye inonzi chii. Imwe nzira yekuzivisa munhu wese wawakabatana naye kare yakangovhura akaunti yako itsva ye Instagram.
Zviri kungoita pfupi pfupi pa Facebook, twitter, linkedin, goldenLine. Ichokwadi, usatarisira zvinoshamisa zvinoshamisa uye kamwe kamwe vanhu vane zviuru zviviri vanozotevera purogiramu yenyu.
Parizvino, pamusoro pe40% yaunayo pane Facebook zvichida atova neAccess account. Sezvaunoziva Facebook Instagram zvakabatanidzwa pamwe chete, saka ivo vane chokwadi chekutsinhanisa data. Saka munhu anotevera purogiramu yako pa Facebook achazonyatsoziviswa kubva kumashini kuti iwewo une account ye Instagram. Saka iwe unofanira kufungisisa zvakanyanya nezvemashoko mashomanana pane peji reBusiness Facebook peji.
3. Shingairira zvinhu zvekutengesa pa Instagram
Saizvozvowo mapikicha achandibatsira nemubvunzo Ndingawana sei vateveri pa Instagram?
Apo zvinosvika pamifananidzo uye mabhuku ezvivhidhiyo, sarudzo yakanaka uye kushandiswa kwayo nguva dzose inoshandiswa nguva dzose maererano ne Instagram. Uye kuzvitsaurira kwakakwana kwenguva yako kuchabhadhara zvirokwazvo nekubudirira kwehuwandu hwemifananidzo yako uye kuwana kwechipiri nhamba yevateveri.
Chinhu chinonyanya kukosha iwe unofanirwa kuisa pfungwa apa apa unhu hwemifananidzo yako uye hutano hwemafirimu ako aunenge uchataura. Somuenzaniso, mavhidhiyo ari muhutano hweHD anopfuura 50% kakawanda pane instagram uye Facebook. Uyewo, hutano hwezvinhu zvako zvekutsvaga hunofanira kunge huripamusoro-soro nokuti mamwe makambani anopa zvese zvinhu muHD.
Iko inonyanya kukosha muurongwa hwekutengesa mu Instagram ndewokuti:
Shandisa zvikuru makambani, kwete mapikicha. Vashandi vepa Instagram vanogona kunyanya kupindura mafirimu pane kutora mifananidzo. Mazuva ano, Instagram uye Facebook zvigadziridzo zvakashandura maitiro avo kuitira kuti mafirimu awedzere kukurudzirwa. Izvi zvinokonzerwa ne clean server economy. Iyi firimu inotora 200-300 MB uye vanhu vanotarisa mamwe mitsara vakadhinda kakawanda. saka mushure mokunge imwe nguva yekuti firimu ichabviswa kubva pakurongwa. Zvinosuruvarisa, iwe unofanirwa kutaura pachena, havasi sevakakurumbira pa Instagram sekambani.
Sarudza chete high quality photos! Kana iwe uchienda kumusorosoro wepuru 10 pa Instagram. Iwe uchaona nokukurumidza zvikuru kuti vazhinji vekambani idzi vanongotumira chete muhupamhi hwepamusoro yemifananidzo iyo inoratidzwa, zvechokwadi, zvakakwana kune zvavanotsanangura. Kana iwe uchitanga kutumira mapepa ayo ari echokwadi pasi kana hurefu hwepakati. Zvechokwadi vanhu vanotanga kusiya purogiramu yako.
Kugadziridza Photos Muteveri wekutsvaga unozove kuve kuchinjwa kwemifananidzo kuburikidza nemafuta. Vazhinji vezvizivikanwa zveku Instagram vanogona kuvandudza mavara uye kuwedzera zvinonakidza. Kunyanya pafoni, vazhinji vashandisi vanoshandisa maMayfair filter. Zvisinei, kana iwe wakanaka nekugadzirisa mufananidzo, zvinyatsonyatsonaka zvakashata. Ndinogona kukubatsira kuwana vateveri vakawanda.
Shandisa ma-hashtag pane imwe mufananidzo. Iko mari yakawanda yaunogona kuwedzera ndeye 30 hashtas. Kuti uwane rakakodzera kubasa raunoda vamwe vashandisi veku Instagram kuti vatsvake iwe, tinokurudzira kuti uone mufananidzo. Iyi ndiyo webusaiti yakanyanya nyore iyo iwe unogona kusarudza mahedheni anozivikanwa. Uye pamusoro peizvi, sarudza yakanyanya kufarirwa uye yega yega yega yega yekuti iwe uwedzere pa Instagram kuwedzera mahainagag ako aunoda.
Nzira yekuita sei vateveri pa instagram - Webstagram Kuumba Marketing Marketing Hasztags!
Nyora mafirimu maawa 24 nemazuva. Panguva ino, uri kushamisika kuti zvinokwanisika sei kuparidzira mavhidhiyo nemavhidhiyo mu Instagram zvinenge zvichiitwa maawa 24 pazuva. Saka mhinduro yacho iri nyore, unofanira kutanga kushandisa mapurogiramu ekutengeserana anokubatsira iwe kutengesa kutengesa.
4. Shandisa mapurogiramu anongedza kutengesa
Chirongwa cheTailwind automation. Sangano redu rakabudirira kushandisa iri svondo kuwedzera nhamba yevateveri ve Instagram. Zvechokwadi, pakutanga chaiyo takashandisa piritsi yakafanana. Asi mushure memamwe masvondo matatu kana mashoma takacherechedza kuti kunyanya kuwedzera zvigadziro zvinofanira kunge zvichiita maawa maviri ega ega kuti zvive nehuwandu hwevateveri mumashini edu.
Nzira yekuita sei vateveri pa instagram - Tailwind Marketing Automation!
Iyi purogiramu inobvumira iwe kuti ugadzire chaizvo nhamba yakawanda kwazvo yezvakanyorwa. Izvo zvisina zvikamu zvako zvinotumirwa ku Instagrama apo iwe uri kurara, somuenzaniso. Saka kambani yedu yakatanga kuita zvishoma kubva pakutanga kushandisa purogiramu yacho uye purogiramu yemutambo. Takawedzera nhamba yevateveri pa Instagram kune 5,000. Parizvino, tine Instagram yakakura mumakambani edu, saka hatisi kunyanya kukoshesa pakusimudzira iyi kambani yekudhinda.
Nzira yekuita sei vateveri pa instagram - Buffer Marketing Automation!
5. Ratidza uye uudze
Kazhinji vanhu vatova nenyaya vanotarisa nzira dzakabatana. Panguva ino, basa rako richava kuvabatsira kusimbisa bhizinesi ravo pachavo. Nzira yakareruka yekuita izvi ndeyekuwedzera mhinduro kana zvishoma pfupi nezvechigadzirwa chake. Ndinokutendai pakutumira mufananidzo kana kuwedzera ruzivo rwaunofarira.
Vanhu vazhinji ndinozvibvunza mubvunzo mumwechete How to get followersów Instagram? Uye saka tibatsire vamwe ivo vachakubatsira. Nokuwedzera mhinduro kuzivisa vamwe vashandisi kuti iwe unofarirawo zvakare, unogonawo kuwedzera ruzivo kutevera purogiramu yangu kana Hure Onawo mifananidzo yangu. Pamusoro pe80% yevashandisi vachatungamira purogiramu yako, hongu, sezvo iwe uchanyatsotaura pane webhusaiti yavo nekambani yavo. Tinoziva kubva pane zvakaitika kuti inonyatsoshanda nokuti hupenyu hwedu hunovakwa.
Uye regai tive vakatendeseka kuti vhidhiyo yevhidhiyo ndeyekugadzira kutaurirana pakati pevanhu. Nenzira yakawanda, iyi ndiyo yekufungidzira kwekuita izvi sezvo zvaifungidzirwa nezvemakore 15 akapfuura. Vanhu ivavo vanotaurirana nevanhu nekukurumidza.
Uye akabatanidzawo paIndaneti kwete chete kurarama. Nzira iri nyore ndeyokuwana vanhu vemo. Semuenzaniso, Kana uri kutarisira kukurudzira bhizinesi rako muWarsaw.
6. Ongorora kudhinda kwedata
Kuchengetedza kwekutsvaga kudhinda kuisa purogiramu yako zvakare chinhu chinokosha zvikuru.
Ive kana usina pano mubvunzo? Dhadhara data kana kuti usakanda deta?
Nzira yekuita sei vateveri pa instagram nekuongorora kudhinda data.
Nzira iri nyore yekuongorora deta uye kuwana deta iyi ndeyechokwadi kushandisa chirongwa cheTailwind. Chinhu chinotevera chaunofanira kuita ndeche Google Analytics. Zvakakodzera kupinda nguva nenguva uye kuona vanhu vangani vanopinda Instagrama, kunyanya kana iwe wakagadzirira pakushambadzira kwepa Facebook.
7. Nyora vashandisi vanozivikanwa
Kuwedzera uye kuisa, kunyange hashtaging, kunowedzera kukwanisa kusvika kune vashandi vemo. Somuenzaniso, Kana uchigara pedyo neWarsaw uye unoda kuwedzera bhizinesi rako kuguta reLegionowo. Tinokurudzira kuwana guta re Dubai kana mutungamiri weguta re Dubai pa Instagram. Zvinonyanya kukoshesa tsika nemitambo.
Kurongwa kwevashandi ava vanozivikanwa paIndaneti. Izvozvo zvinogona kuita kuti vanhu ava vatsanangurire mufananidzo mumufananidzo wako kana kuti vanoda mufananidzo wako kuvanhu vagara vagara mune imwe nzvimbo. Zvechokwadi, ichakubatsira iwe kuti uwedzere kwete kwete chete nhamba yevanhu vanoona mabhuku ako pa Instagram asiwo kukubatsira kuti uwane vanhu vane chokuita nehurukuro yauri kutsvaga.
Saka unowana sei vateveri pa instagram munguva shomanana pane imwe nzvimbo? Tarisai, chokwadi, nokuda kweVIP, vanhu vanobatana neTV kana kutengeserana. Tora uye uwedzere ruzivo kana mumwe wavo achipindura uye ini ndinoda mufananidzo wako kubva mumashini, uchawana mazana mashomanana pane zvaunofunga.
8 Shandisa geotargeting pa Instagram
Shandisa geotargeting - iyi yakanyatsonaka iyo inosvika panzvimbo yekugara kwebhizimisi rako. Nokuti kana uri kutsvaga kambani yaunoda kushanda kana iri kutsvaga vatengi vakawanda. Tinokurudzira kuti iwe, somuenzaniso, wedzera nzvimbo yako pane Instagram campaign campaign. Kana iwe uchitanga bhizinesi muKrakow, hazvina musoro kuti utsvake vatengi kubva, vanoti, Gdansk. Saka vanodikanwa vanobva kunze kwenzvimbo yakasarudzwa havana hanya newe kana iwe une bhizinesi rinoshanda chete pamusika wekunze.
Kana iwe uchida kutamira kuUAE yose, ingowedzera maguta kune muenzaniso #Dubai uye #Abu Dhabi kana #Sharja. Kushandiswa kwegorosi iri mukana wakanaka kwazvo nokuti mishonga inoratidza munhu aripo munzvimbo iyoyo iyo kambani yako iri kukurudzira chigadzirwa cheharaunda ino. Uyewo zvakakodzera kuongorora uye kuwedzera nzvimbo yaunogona kuisarudza, wedzera mufananidzo kana video.
9. Tevera uye tevera vamwe vatengesi
Nzira yakanaka kwazvo yekuwedzera huwandu hwevateveri ndeyekutevera matanho akambogadzirwa munguva yakapfuura. Semuenzaniso, muvambi wekambani yedu ndiJohn West anga achirongedza mawebhusaiti muDubai kwemakore mazhinji. Kwaingave kufamba kwekuchenjera kungo tevera mbiri yake pa linkin kana pa Facebook. Ona izvo zvinopihwa nemuenzi uyu uye kuti anowedzera sei.
Nehunyanzvi, hongu, iri 100% zviri pamutemo uye hazvidi chero danho kubva kwauri. Anotevera munhu watingakurudzira ndewechokwadi John West. Izvi ndizvo chaizvo zviri kutungamira kukura Hacker kubva America. Zvakare zvinobudirira kana iwe uchiteerera zvishoma uye kuverenga nezve kushambadzira uye iwe uchazivawo maitiro ekuongorora data rese uye maitiro ekuvaka rudzi rwakasimba kwazvo paInternet.
Titendei isu, vazhinji vevanhu ava vanozivikanwa pawebhu. Uyewo akaedza kudzidza kuti vatevedze sei pane zvekuongorora nekuongorora vamwe. Pinda mumapurogiramu avo uchitarisa maitiro avo ekutsvaga zuva nezuva uye kungoita shanduro dzakafanana pawebsite dzavo uye pamagariro avo evanhu.
10. Systematics mukuvandudza purogiramu ye Instagram
Chinhu chakakosha zvikuru chiito. Kugadziriswa ndicho chinhu chinoita kuti kubudirire. Kuzadzikiswa kwemitambo mitsva uye kuwedzerwa kwemitambo mitsva yekudhinda inongowanikwa. Kukurudzira pa Facebook kuwedzera zvinyorwa zvekubatanidza ndeyezvose zvaunoda kusanganisa zvose. Inguva yekuwedzera ruzivo zuva negore kuti rega injini yekutsva izwisise zvaunoda kuti vataure.
Zvinotora nguva yakawanda yekusimudzira chigadzirwa chako mumagariro evanhu. Nokudaro, kunze kwekugadzirisa nguva nenguva pane zvakakodzera kupinda mukati kuti uverenge pamusoro pezvinhu zvitsva mumhizha. Kutengesa kuri kuchinja zuva rimwe nerimwe, izvo zvakave zvichibudirira mwedzi ye6 yapfuura uye zvingatove zvisingakwanisi zvachose.
Nguva dzose edza kuzvibvunza kana chinonyanya kukosha ndechekuti uwane sei vateveri pa instagram. Unowana mari sei neizvi?
Kuti uwane summary How to get followers in instagram?
Zvinosuruvarisa, kuti uwane nhamba huru yevanhu vanotevera mararamiro ako evanhu. Iwe unofanirwa kunge uine mafoto akanaka uye unoshanda zvakanaka mavhidhiyo muYouTube. Nzira yakanaka kwazvo ndeyekusimudzira purogiramu yako pane mamwe mavhidhiyo emitambo, zvakadai se metacafe uye pintere.
Kushandisa nzira dzedu nekupa mazano pakudzika kuchakubvumira kuwana nhamba huru yevateveri kwete paIndaneti chete asiwo pa Facebook. Zvinosuruvarisa, izvi hazvikwanisi kubudirira nebasa rekuita basa. Iwe unofanirwa kufungisisa zvakare mararamiro ako ekutengesa. Nokuti nguva yakatsaurirwa kuunganidza boka guru revateveri nekubatanidza vashandisi pa Instagram inotora hupenyu hwako huzhinji.
Uyewo muchidimbu kuti sei vateveri ve Instagram vanoedza kuita kuti purogiramu yako izere zvizere uye zvinoyeuchidza uye kuwedzera kuwedzera Instagram yako yekutengeserana nemamwe mazamu evanhu, somuenzaniso Facebook uye pinterest. Nguva dzose edza kubatanidzwa uye kupindura pamifananidzo yevamwe vashandisi.
Edza kuti usazombozvipedza nokutevera vamwe. Nokuti Instagram ine spammer inodzivisa mafaira. Saka kutevera vanhu vazhinji vanogona kuguma kuvhara account yako uye zvakaoma chaizvo kudzoka.
Tinogona kukubatsira muEurope here?
Warsaw Sites Nzvimbo chete kubva kuDaily City Company!
Inoshamisa SEO yeWarsaw websites kubva ku Dubai City Company!
Mawebsite eWarsaw ndizvo zvauri kutsvaga? -Over 50% yevanhu vanoita bhizimisi muWarsaw. Uye kushanda munzvimbo dzekutengesa uye kutengeserana kwepaIndaneti.
Ichokwadi, anoshamisika kuti zvinodhura zvakadini kuisa webhusaiti paGoogle. Munhu wose anoziva kuti Warsaw ibhizimisi rakachena.
Mhinduro yacho haisi nyore zvachose. Kunyanya kudaro kana zvasvika kune rimwe guta rakafanana neWarsaw.
Kutaura zvazviri, mutengo unotarisa pano pane zvakawanda, hapana hutsika hwakakosheswa mutengo we SEO kana nzvimbo yekunzvimbo.
Tisati tava kutanga kufunga pamusoro pekuisa nzvimbo yedu yepaiti kana rekutsvaga muIndaneti. Zvinhu zvakawanda zvinofanirwa kuongororwa.
Positioning yeWarsaw Parties ne Dubai City Company
Somuenzaniso, mhizha iyo yatinoda kuisa kambani. Zvadaro kukwikwidzana kwekambani paGoogle.
Iwewo unoda kutarisa mhinduro mumashoko anokosha checker. Ichokwadi, izvo chete zvatinoda kuita kuti nzvimbo yacho ipikisane.
Zvakakoshawo kutarisa kuti chii chinonzi webhusaiti ikozvino uye kuti makore akawanda ari pamusika.
Zvadaro yakanyatsogadziriswa maererano neGoogle yekutsvaga injini mirayiridzo uye kuti zvakagadziriswa zvakatumirwa sei.
Kutanga Check: Site Checker Pro
Pinda uye uone SEO: https://sitechecker.pro/en/
Zvino: Neil Patel Uber
Zvakakodzera kupinda uye kutarisa Neil Patel Ubersuggest:
Sarudza iwe pachako mutauro wePoland uye uone kuti zvakaoma sei kuisa eg motokari muWarsaw kana, semuenzaniso: zvinzvimbo zvemawebhusaiti Legionowo
Chii chinokonzerwa nekuisa mawebsite muWarsaw?
Zvakakosha kuziva kuti, semuenzaniso, mhando dzemashoko aya: Kuiswa kwemaWarsaw Mapeji ndiyo yakawanda kupfuura dzimwe nhengo dze SEO.
Saka kana isu tiri vekambani yakakurumbira yakafanana nemotokari, usiku, mahotera kana SEO. Zvadaro kwete chete mutengo wekugadza paGoogle huchave wakakwirira, asiwo nguva yekusimudza ichawedzerwa.
Saizvozvowo, patinoda kuisa webhusaiti muguta guru, rakadai saKrów kana Łódź.
Mutengo weanyanzvi akanaka pahuwandu hwemwebsite huchawedzera. Saka zvichatora nyanzvi dzedu nguva yakareba kusimudza nzvimbo yewebsite yako muBing kana Google.
Chii Chingayeukwa panguva yekuisa?
Zvisinei, zvinofanira kurangarirwa kuti kuiswa kwewebsite ndeye nzira inounza kubatsirwa kwenguva yakareba uye kubata basa rinozobvumira kuti mararamiro asimbiswe muvanoshandisa nekuziva uye kuvapo munzvimbo dzakanaka paGoogle kunyange mushure mokupera kwemabasa .
Zvinorevei kuisa mapato mumaWarsaw?
Ikozvinokosha mari yekuisa pamwe nekambani yedu PLN 350. Iyi haisi yemari yakawandisa kana tiri kutaura pano pamusoro pemhando yehurukuro: kuiswa kwemaWarsaw Centralan mapeji kana Old Town.
Kukurukurirana Kumufaro kwatiri?
Mutemo wekambani yedu kuwedzera kuonekwa kwewebsite yako mune injini yekutsvaga yeGoogle. Iwe pachako, taura nomumwe wevatengesi vakakurumbira muPoland.
SEO kana kutsvaga injini yekushanda muWarsaw inzira inoda kutora zvakakodzera. Somuenzaniso, kuisa mawebsite. Warsaw ndiyo inotungamirira basa.
Isu tinogara tichitevedza kuongorora kwewebsite maererano. Kuita mabasa mukushandura HTML code. Uye sechikamu chekuchengetwa kwepawebsite, tinoedzawo kubatsira magwaro evanhu akabudirira zvakadai se Instagram.
Pamusoro pe90% yevashandi vedu vachawana yakakwirira kwazvo yevatengi nekuisa mawebsite muWarsaw.
Nokuti nzvimbo iyo inopinda mumigumisiro yekutsvaga nguva dzose inoguma nevatengi vatsva kubva kuGoogle. Izvi, pamwe chete, zvinoshandura pakuonekwa kukuru kwekambani yako kuGoogle, Bing, Yahoo uye kunyange Facebook. Saka kusvika kune boka rakakura revanhu vanogona kutenga vatengi. Iine zvinobatsira zvakafanana.
Sangano rakanaka uye rinobudirira reSeO richagara richitora dambudziko rekuisa webhusaiti mune rimwe guta rakafanana neWarsaw.
Zviitiko izvo zvichabatsira mutengo wekuchengetwa kwewebsite munzvimbo dzakapoteredza Warsaw nedzimwe nzvimbo dzePoland.
Chii chinofanirwa kufungwa maererano nekuisa kwewebsite yako muMazovia?
sezvatakambotaura kare, chikamu chezvinhu zvakawanda, zvakadai se:
Ndiri kukupa iwe kubatanidzwa pamwe chete nehutungamiri hwakanakisisa hwokutengeserana muD Dubai.
Ndinogara ndiripo nenzira yakajeka kuwanda kwemabasa angu uye kuti tichaisa sei webhusaiti yako muWarsaw.
Chikamu chekutanga chekugadzirisa kwedu nzvimbo ichava SEO yekuongorora.
Positioning / SEO inowanzoenzanisa shato. Kutanga, dare kana webhusaiti inofanira kuongororwa maererano nekukurumidza paGoogle.
Tarisa Hurukuro yePeji paGoogle
Iwe unogona kuzviita iwe pachako:
Chinhu chinonyanya kukosha ndechokuti uone chiremera chei iwe webhusaiti yako.
Zvakakoshawo kutarisa nhamba yehutano hunobuda uye hunobuda kune domain.
Tarisai iko pano: https://www.seoreviewtools.com/website-authority-checker/
Mushure mokuongorora DA - Domain Authority uye PA - Page Authority. Iyi haisi yeGoogle chikwata asi inofanirwa kuona.
Zvakakosha kuongorora kuwanda kwemigumisiro yekutsvaga yeGoogle. Uye ndezvipi zvingakanganisa kuiswa kwe peji.
Pakati pevhesi, mutengo wekutsvaga webhusaiti muWarsaw unosanganisira kugadzira zvigadzirwa pablog uye nekugadzirisa nzvimbo yacho maererano nemashoko makuru anosarudzwa nemutengi. Ndiko kuti, muchidimbu, iwe.
Chii chatinobhadhara zvakanyanya pakuisa kambani yako?
Nhasi kambani yedu iri kunyanya kusimbisa bhaibheri rinokosha uye zvinyorwa zvakabudiswa pamisasa yekunze.
Ndicho chikonzero nei zvakakosha kuti mawebsite atinotarisa muWarsaw anopa vaverengi vavo, hongu, uye injini yekutsvaga yeGoogle ndiyo yakanakisisa uye mafungiro ayo maonero angu ndeaya anonyanya kukosha zvinowanikwa paGoogle.
Tinofanira kuyeuka kuti dzimwe nguva webusaiti inoremererwa ne "zvikanganiso zvevakasimudza kubva kare" - somuenzaniso, vakavakwa pane zvidzidzo zvine maitiro akaderera, saka vakatungamirira kune hutsika hwakanaka hwekunze.
Mumamiriro ezvinhu akadaro tinofanira kurwisa zvakaoma dzimwe nguva kunyange mavhiki kuti tiwedzere SEO.
Nzvimbo dzedu dzichabatsirawo mumatambudziko asina tariro. Ikoko kunzvimbo paGoogle kwakaoma zvikuru. Zvechokwadi, tichakupai sarudzo yakanakisisa yebhizimisi renyu.
Izvo zvichatibvumira kuti tionekwe mumigumisiro yekutsvaga nekambani yenyu muPoland.
Kubatsira Kwatinoita? Tinoshanda muWarsaw yose
Isu tinongotengeserana chete nekushambadzira uye kushandiswa kwemasangano!.
Ndiri kureva, hapana nzira shomanana mumusoro wekuisa mawebsite yeWarsaw.
Tose, tine makore anopfuura 150 ane ruzivo mukuisa mawebsite muWarsaw.
Isu tinoita nzvimbo yakakodzera yemawebsite muWarsaw. Saka mawebsite evatengi vedu anogara ari munzvimbo dzakakwirira muBing neGoogle.
Tinokukoka iwe kuti uzvizive nechipo chedu (nzvimbo chaiyo patinoisa pasi apa) uye ruzivo rwokutanga kubatana muWarsaw.
Tiri sangano rinopa maitiro kunewo makambani ane zvakakosha muWarsaw. Vatungamiri vedu vanobudirira kushandira vatengi vakapfuma kubva muguta guru.
Iwe unogona kutiwana isu pane OLX muWarsaw!
Ona tsanangudzo yakajeka yehuwandu hwekuchengetwa kwewebsite muWarsaw.
Positioning yeWarsaw Wilanów
Saka kuisa mawebhusayithi eWarsaw nguva dzose ichava nheyo inokosha kwatiri. Saka nyanzvi dzedu dzinodzidziswa kuita izvi kwemakore mazhinji.
Isu tinosangana nekambani imwe neimwe zvakananga uye zvakajeka uye kune mumwe nomumwe mumwe nomumwe. Muhurukuro yekutsvaga mawebsite eve mutungamiri - Warsaw. Hatina kana akaenzana.
Nokuti tinoziva mikana yematengesi uye tinovaka mazano ekufambisa kwebhizimisi rimwe nerimwe. Tinovonga kuti isu tinongosvika kuboka rakanaka revakagamuchira.
Isu tinoshandisa zvigadzirwa zvinobudirira zvekutengesa kweInternet izvo zvingakubvumira kukunda zvikwereti zvakawanda paGoogle.
Zivo, unyanzvi uye ruzivo rwekuDairika mukuisa mapeji muChirungu neArabic, kugutsikana kukundwa kwewebsite yepikisano paInternet.
Kutengesa zvakakwana uye kutengeserana kwepaIndaneti kuchaita kuti Dubai City Company iwedzere kutengesa kwechigadzirwa chako.
Kambani yedu iboka rinokuita kuti uwedzere kuva nechivimbo pamusika uye kuwedzera nhamba yekutsvaga chigadzirwa chako / maitiro ako pakuisa mawebhusayithi muWarsaw uye ichakubvumira kuti ufare zvikwereti zvinowedzera zvekambani yako.
Vose vanotenda kunzvimbo yakagadzikana uye inodhura muWarsaw. Kunyange zvazvo zvakaoma kutenda, zvipikisiso zviviri izvi zvinowirirana.
Famba muhurukuro ku Dubai
Nzira Yokuwana Mushanduri MuChina